ရာဇဝငျတှနေဲ့ ငါ – My Blog
ကြှနျနေျာ့ မရီး နာမညျက မစု နာမညျ အရှညျတော့ မပွောတော့ဘူးဗြာ ကြှနျနျော က ကြှနျနေျာ့ အကို အိမျမှာ အလုပျလုပျရငျးနေ တယျ ကြှနျနျော နဲ့ မစု ဖွဈပကျြတာလေး တခြို့ ပွောခငျြလို့ပါ ။ နာမညျအရငျးတှေ အလုပျအကိုငျတှေ တော့ အကုနျမပွောတော့ဘူး ဗြာ ။ ကြှနျနေျာ့ နာမညျ ကို ဖိုးဇျောလို့ ပဲ မှတျထားလိုကျတော့ ။ကြှနျနေျာ့ အကို အလုပျ နဲ့ နယျဆငျးသှားပီး တဈပတျလောကျ အကွာ ပေါ့ ။ မနကျပိုငျး ကြှနျနေျာ့ တူလေး ကို မူကွိုလိုကျပို့ပီး အပွနျ မစုက သူ့ကို ဈေးလိုကျပို့ဦးဆိုပီးပွောတာ နဲ့ ဈေးလိုကျပို့ဖွဈတယျ ။ အဲ့နကေ့ မစု က ထမိနျစကပျ အနကျရောငျ အကွပျနဲ့ အပျေါက လဲ တီရှပျ အစိမျးနု အကွပျလေး ဝတျထားတာ ။
ကြှနျနျော နဲ့ အတူတူ ဆိုငျကယျ နဲ့ ဈေးသှားတာပေါ့။ဈေး ရောကျဘို့က ဆိုငျကယျနဲ့ ဆယျ့ငါးမိနဈလောကျ မောငျးရတယျ။မစုက ဈေးခွငျးတောငျးကိုလကျတဘကျနဲ့ ကိုငျပီး နောကျလကျတဘကျက ကြှနျနေျာ့ ခါးကို ဖကျထားတယျ ။ အရငျက လဲ ဈေးလိုကျပို့ဖူး ပမေယျ့ အခုလို ခါးတော့ မဖကျဖူးဘူး ပုံခုံးကိုပဲ ကိုငျထားတာ မြားတယျ။ ဆိုငျကယျက ဖငျထောငျ ဘီး ဆိုတော့ ရှကေို့ တိုးတိုးလာ ရငျး သူ့ နို့သီးကွီး နဲ့ ကြှနျနေျာ့ ကြော ကို လာလာ ဖိ နသေလို ဖွဈနတော ။ စိတျထဲ ယားကြိကြိ နဲ့ဗြ ။ အံကွိတျပီးမောငျးခဲ့ရတယျ ။ တျောကွာ ဆိုငျကယျ မှောကျနမှေ ဒုက်ခ ။ ဒီလိုနဲ့ ဈေးရောကျတော့ ကြှနျနျောက ဆိုငျကယျရပျတဲ့နရောမှာ စောငျ့နခေဲ့တယျ ။ မစုက ကြှနျနေျာ့ ရှကေ့ နထှေကျသှားတော့ အမှတျမထငျ ကွညျ့မိလိုကျတာ ထမိနျစကပျကွပျကွပျ ဝတျထားတဲ့ ကြှနျနေျာ့ မရီး တငျပါးကွီး တှကေ ကားထှကျနတောပဲဗြာ ။ ထမိနျစကပျ တောငျ ကှဲ ထှကျသှားမလား စိုးရိမျရတယျ ။ ကြှနျနျောလဲ မစု ဈေး အတှငျးထဲ ဝငျ သှားတဲ့ အထိ သူ့တငျပါး ကွီးတှေ နိမျ့တုံမွငျ့တုံ နဲ့လြောကျသှားတာကို ငေးကွညျ့မိနတေယျ။ ကလေး တဈယောကျ အမေ မရီး ကို စိတျထဲက နေ ပွဈမှား မိနရေငျး ဆိုငျကယျစတနျး မှာ ထိုငျစောငျ့နမေိတယျ ။ တဈနာရီလောကျကွာတော့ ပွနျထှကျလာတယျ ။
ကြှနျနေျာ့ ဆီကိုလှမျးလာတဲ့ခွလှေမျးတှေ ခွတေဈလှမျး လှမျးလိုကျတိုငျး ခွသေလုံးသား က ဒူးနား အထိ ဖှေးကနဲ ဖှေးကနဲ ။ အ နား ရောကျတော့ မရီး က ဘာကွညျ့နတောလဲ သှားမယျ ဆိုမှ သတိဝငျလာပီး စတတျ ပါတဲ့ ဆိုငျကယျကို အယောငျယောငျ အမှားမှား ကဈ နငျးပီး နှိုးလိုကျတယျ ။ အပွနျလမျး တလြောကျလုံးလဲ အလာတုနျးကလိုပဲ သူ့ နို့သီးကွီးတှေ နဲ ဖိဖိ နတော စိတျကို ထိနျးနရေ တယျ။ အိမျပွနျရောကျတော့ ဘာစားခငျြလဲတဲ့ မေးတယျ ။ အဆငျပွတော ခကျြပါ လို့ ပွောပီး ကြှနျနျောလဲ အိမျထဲ ဝငျလာလိုကျ တယျ ။ အိမျမှာက မရီး နဲ့ ကြှနျနျော ၂ ယောကျတညျး ။ အဝတျအစားလဲပီး လကျဘကျရညျဆိုငျသှားမယျ လို့စဉျးစားပီးမှ မသှားခငျြ တော့တာ နဲ့ အခနျးထဲ အောငျးပီး အငျတာနကျထိုငျကွညျ့နလေိုကျတယျ ။ တဈနာရီလောကျနတေော့ မရီးက ကြှနျနေျာ့ အခနျး ၀ လာ ရပျပီး ဆာရငျ စားလို့ရပီဆိုပီးလာပွောတယျ ။ ခုနက ဈေးသှားတုနျးက ဝတျစုံ မလဲ ထားသေးဘူး။ အကြီ မလဲ သေးဘူးလား မစု ဘာလို့လဲ ဘာမှ ဖွဈပါဘူး ဒီဝတျစုံနဲ့ ကွညျ့ရတာ တမြိုး ကွီး မို့လို့ အံမယျ .. ငါက ဘာဖွဈနလေို့လဲ ကွညျ့မကောငျးလို့လား တ အားကွညျ့ကောငျးလှနျးနလေို့ အမ ရေးးးး
ငါ့မောငျက ရှဲ့တာလားဆိုပီး ကြှနျနေျာ့ အခနျးထဲကို ဝငျလာတယျ အခနျးက ကဉျြးကဉျြး ရယျ ပီးတော့ ကြှနျနေျာ့ ကုတငျပျေါ ဝငျထိုငျပီး ဒီဝတျစုံ နဲ့ ကွညျ့ရ ဆိုးနလေို့လား မဟုတျပါဘူး ..ဒီဝတျစုံ နဲ့ တကယျလိုကျပါတယျ လှလညျး လှပါတယျ ..အခုက အကိုကွီးမရှိတဲ့ အခြိနျ ဆိုတော့ …. နငျ့အကိုကွီး မရှိတာ နဲ့ပဲ ငါက ခုလို မဝတျရတော့ဘူးလားမဟုတျပါဘူး အမ ဝတျခငျြဝတျပါ ကြှနျနေျာ့ အတှကျ အဆငျမပွလေို့ ပွောမိတာပါ ဘာကို အဆငျမပွဖွေဈနတောတုနျး ဖိုးဇျောရဲ့ ကြှနျနျော က မစု ရဲ့ မတျလေ အခုလို ဝတျထားတော့ မစု အလှတှေ တအား ပျေါလှငျနတေော့ တျောကွာ မကောငျးပါဘူး မစုရယျ ဘာလဲ ခုနက ဈေးမှာ အမ ကို ခိုးကွညျ့ပီး စိတျထဲ မဟုတျတာတှေ တှေးနမေိနတော မလား ကြှနျနျော ဝနျခံပါတယျ မစုက လှတာ ကိုးး ကဲပါ ငါ့မောငျရယျ ကွညျ့ခငျြလဲ ခိုးမကွညျ့ပါနဲ့ .. ဒဲ့ကွညျ့ပါ ..ဟုတျပီလား လှလိုကွညျ့တာပဲ မစု ပိုတောငျကနြေပျသေး ဘယျလိုလဲ အမ က လှသေးရဲ့လား
ဆိုပီး ကုတငျပျေါမှာ ထိုငျနရော ကနေ ထပီး ကိုယျကိုလှညျ့ ပွလိုကျတယျ။ မစု ကိုယျလုံးက မငျးသမီး ခှနျးဆငျ့နခွေညျလို ပုံမြိုး ။ တဈခဲနတေယျ ။ ကွညျ့နရေငျး မနနေိုငျတော့ အိမျမှာ ကလဲ ဘယျသူမှ မရှိ ။ ကြှနျနျော စိတျရိုငျးဝငျပီး မစု ကို ဖကျပဈလိုကျတယျ ။ ပီးတော့ နုတျခမျးတှေ ကို အငမျး မရ နမျးပဈလိုကျတယျ ။ခနနတေော့ မစုက ကိုယျခငျြးခှာပီး နငျ့ အကို ကို မကွောကျဘူးလား တဲ့ ကြှနျနျောက မကွောကျဘူး ဆိုတော့ မစုကလဲ ဒါဆိုငါလဲမကွောကျဘူးလာလိုကျခဲ့ ဆိုပီး အိမျရှကေို့ထှကျသှားတယျ ပီးတော့ အိမျ ရှေ့ တခါး ကို ပိတျလိုကျပီး သူ့ အခနျးထဲ ဝငျသှားတယျ ။ ကြှနျနျော လညျး မထူးတော့ဘူးဆိုပီး ပုဆိုး တိုတိုပွငျဝတျပီး မစု အခနျးထဲ ကိုလိုကျသှားတယျ ။ အခနျးထဲရောကျတော့ မစုက သူ့ ဆံပငျတှကေို စုပီး သရပေငျနဲ့ နောကျမှာ တှယျလိုကျတယျ ။နဖူးပွငျလှလှ ရငျဘကျကွီးကွီး တငျပါးကားကား နှငျ့ မစု ။ မငျးကွီးကွိုကျ ဆိုတဲ့ပုံမြိုး ။ ကြှနျနျော မစုကို ဖကျပီး နုတျခမျးတှကေို နမျး လကျ တဘကျကလဲ ထမိနျစကပျပျေါ က တငျပါး တငျးတငျးတှေ ကို ပှတျဆှဲ မိနတေယျ။ မစု က လညျး နမျးနရေငျး နဲ့ ကြှနျနေျာ့ ပေါငျဂှ ကွားထဲလကျထိုးထဲ့ပီး ကြှနျနေျာ့ ငပဲကို လကျနဲ့ ပှတျဆှဲတော့တယျ ။ ကြှနျနေျာ့လကျခြောငျးတှကေ မရောကျမှနျးသိရကျနဲ့ ထမိနျစ ကပျ ပျေါကနေ ဖငျအကှဲ ကွောငျး ကိုလိုကျပှတျစမျးနမေိတယျ ။ သူ့ နို့သီးတှကေ ကြှနျနေျာ့ ရငျဘကျ မှာ ဖိညှပျနတေယျ
တငျးကွပျနတေဲ့ ထမိနျစကပျ ပျေါက နေ ဖငျအကှဲ ကွောငျးထဲ ထိ ထိထိမိမိ စမျးမရဘူး။ တငျပါး နှဈခုက တငျးရငျးပီး ကားထှကျနေ တာ ပြော့စိစိမဟုတျပဲ တောငျ့တောငျ့တငျးတငျး ရှိလှတယျ ။ ကြှနျနျော တို့ နှဈယောကျ အနမျးတှေ က ကွမျးလာသလို မရီး မစု ရဲ့ လကျကလဲ ကြှနျနေျာ့ လီး ပျေါမှာ မွနျသထကျမွနျလာပီး ပှတျတိုကျဆှဲ စောငျ့ နတေယျ။ကြှနျနေျာ့ လကျနှဈဘကျက လဲ တငျပါး နှဈ ခွမျးပျေါတငျပီး ဖဈြညှဈနမေိတယျ ။ ရငျခုနျသံတှေ လညျး တအား မွနျလာတယျ။ ခနနတေော့ မစုက နုတျခမျးခငျြး ခှာလိုကျပီး ကြှနျ နေျာ့ ကို စိုကျကွညျ့တယျ ပီးတော့ ကြှနျနေျာ့ ပုဆိုး ခါးပုံစ ကို ဆှဲခြှတျခလြိုကျ တော့ အောကျမှာ ကှငျးလုံးပုံကသြှားတယျ ။ ကြှနျနျော က အပျေါပိုငျး စှပျကယျြ လေး တဈခု ဖွငျ့ အောကျပိုငျး ဗလာ ဖွဈသှားတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ ကို မစုက တဈခကျြ ပွုံးရငျး ကွညျ့တယျ နောကျတော့ ကြှနျနေျာ့ ရှမှေ့ာ ဒူးထောကျထိုငျခြ လိုကျပါလရေော ။ အဲ့ဒီမှာ တငျ ကြှနျနေျာ့ လီး နဲ့ မစု မကျြနှာနဲ့က တတနျးတညျး ဖွဈသှားတယျ။ ကြှနျနေျာ့ အတှေ့ အကွုံ အရ မစု ကြှနျနေျာ့ လီး ကို လှတေော့ မယျဆိုတာ တပျအပျ သိလိုကျတယျ။ နောကျကို စုစညျးထားတဲ့ မစုရဲ့ ဆံပငျတှေ ကို ကိုငျလိုကျတယျ ။ မစုက ကြှနျနေျာ့ လီးဒဈ ကို အသာ ဆှဲ လိုကျပီး လြှာဖြားလေး နဲ့ တို့ ထိလိုကျ တယျ ပီးတော့ ကြှနျနေျာ့ ကို တဈခကျြမော့ကွညျ့လိုကျသေးတယျ ။ အသဲထဲ အေးခနဲ ဖွဈသှားတယျ ။ ပီးတာနဲ့ ကြှနျနေျာ့ဒဈဖြား ကို လြှာ နဲ့ ပါတျ ပီး လှတေော့တယျ ။ ကလေးတဈယောကျ အမေ ကြှနျနေျာ့ မရီး တျောတျော ပညာ စုံပုံ ရတယျ ။ ကြှနျနျော ကို လှနေေ တာ မြား အင်ျဂလိပျကားထဲကာ ဆျောတှေ လှသေလိုမြိုး ။လီးကို ကိုငျကိုငျ ညှဈပီး နုတျခမျးကို ဖိ ပီး လှတေယျ ။ ကြှနျနျော လညျး မရီး မစု ခေါငျးကို ကိုငျပီး စောကျဖုတျလိုးသလို တှနျးတှနျး ထညျ့ပီး လုပျနမေိတယျ။ လီး ကို အဆုံးထိ ငုံပီး အထဲ မှာ လြှာ ကို ကစား တာမြားဗြာ .. ကောငျးလှနျးလို့ ပွောမပွတေတျအောငျပါပဲ။
ငါးမိနဈလောကျ ကြှနျနေျာ့လီး ကို လှေ ပီး မစု က မတျတပျရပျပီး ကုတငျ နောကျက ဘောငျမှာ လကျထောကျပီး တငျပါးကွီး ကို ကြှနျနေျာ့ ဘကျလှညျ့ပီး ပဈပေးလိုကျတယျ ။ မစု တငျပါးကွီးကို ကြှနျနျော လကျနဲ့ အသာ တဈခကျြပှတျလိုကျပီး ထမိနျစကပျ ခြိနျ ကို ဖွုတျကာ အောကျကို ဆှဲ ခြှတျခလြိုကျတယျ ။ အတှငျးခံ ဆပျစမိုငျနာ အပွာရငျ့ရငျ့ အတှငျးမှ ထိုးထောကျမတကျ စှံကားထှကျ နတေဲ့ တငျပါးကွီး နှဈခွမျး ။ ကိုကျခဲပဈခငျြစရာ။ တငျပါးကွီးကိုလှုပျပွလိုကျသေးတယျ ။ ကြှနျတျော မနနေိုငျတော့ ။ အောကျခံ ဘောငျးဘီ ကို ဆှဲ ခြှတျပဈလိုကျပီး တငျပါးကွီးတှကေို ဖဈြညှဈကာ ဒူးထောကျလိုကျတယျ ။ မစု ရဲ့ တငျပါး နှဈခွမျး ကို ဖွဲပဈလိုကျ ပီး ပှငျ့အာ ထှကျလာတဲ့ အဖုတျ နှဈခွမျး အရညျရှဲရှဲ ဖွငျ့ ။ ကြှနျနေျာ့ လြှာ ကို ထုတျ ဂြာပဈလိုကျတယျ ။ တငျပါး နှဈခွမျးက ကွီးပီး တငျးနတေော့ အဖုတျဆီ ကို လြှာ က သခြော မရောကျ။ လြှာကို အတငျးလှမျးထိုးတော့ မစု စအိုဝ ကို ကြှနျနေျာ့ နှာခေါငျးက ဖိမိလြှ ကျသား။ ကြှနျနျော မကျြနှာ တဈခုလုံး မစု တငျပါး နှဈခွမျးထဲ ရောကျနသေလို ဖွဈနတေယျ ။ ကြှနျနျော လီးက တအားတောငျနပေီ ။ ကြှနျနျော မတျတပျရပျလိုကျပီး မစုရဲ့ တငျပါးကို ကိုငျကာ အဖုတျထဲ လီးကွီး ထိုးထညျ့လိုကျတယျ ။ အရညျတှေ ရှဲ နတေဲ့ အဖုတျ ထဲ သို့ ခြောခြောခြူခြူ ဝငျသှားတယျ။
ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ အားး အ အားးး ဘှတျ ဘှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ အား…ရှီးးးးးးးးး အားးး မောငျလေး အားးး ဖိုးဇျော အားးးးးး ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ မစုက ကုတငျဘောငျကို ကိုငျက ဖငျကွီး ကို နောကျ ဘကျ ပဈပီး ကြှနျနျောက နောကျမှာ မတျတပျရပျလြှကျ လိုးနတေယျ။ တခကျြတခကျြ မစု ရဲ့ နောကျပွနျ စောငျ့ခကျြ မြား က ပွငျးလှနျးတော့ ကြှနျနျော နောကျပွနျယိုငျလဲ မလို ဖွဈလို့ မစု ခါး ကို ကိုငျထားရတယျ ။ ကုတငျ ဘောငျကို ကိုငျပီး အားရပါးရ ခံနသေော မစု နဲ့ နောကျမှ အပီ အပွငျ လိုးခှဲ နတော ကွောငျ့ ကြှနျး ကုတငျကွီး မှာ တကြီကြီ ဖွငျ့ မွညျ့သံတှေ ထှကျ ကြှနျနျော ဘိုကျသားဆီးခုံ နဲ့ မစုတငျပါးကွီး ရိုကျခတျသံ တဖတျဖတျမွညျသံမြား လီးနဲ့စကျပတျ အတှငျးမှာ တဘှတျဘှတျ မွညျသံမြား ဖွငျ့ အခနျးထဲ အသံမြိုးစုံ မွညျထှကျနတေယျ။ မနကျဘကျမို့တျောသေး ည ဘကျတိတျဆိတျနခြေိနျသာဆိုလြှငျ အသံမြား အား ဘေးအိမျမြား မှ ကွားသှားနိုငျသညျ။ လိုးနရေငျးမှ ပဲ မစု ရဲ့ အပျေါ တီခပျြ ကို လှမျးခြှတျလိုကျတယျ အောကျခံ ဘရာဇီယာ အပွာရငျ့ရငျ့ ပျေါ လာပီး ဘရာဇီယာ ပျေါမှ ပဲ နို့တှကေိုလှမျးကိုငျပီး နောကျမှ စောငျ့ စောငျ့လိုးပေးနခေဲ့တယျ ။
အားးး မောငျလေး ဖိုးဇျော အားးးရှီးးးး ကောငျးလိုကျတာ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ စောငျ့စောငျ့လိုးလိုကျတိုငျး အဖုတျ ဖောငျးဖောငျးကွီးဟာ အတှငျးထဲကို ကြှံကြှံ ဝငျသှားပီး လီး ပွနျထုတျလိုကျတိုငျး အဖုတျနုတျခမျးသားမြားဟာ လီး နဲ့ အတူ ကပျ ကပျပါလာတယျ ။ မစု အဖုတျက အရညျတှေ ကွောငျ့ လီးက ခြောခြောခြူခြူ ဝငျလိုကျထှကျလိုကျ နဲ့ အရမျးကောငျးနတေယျ ။ မစု က သူ့တငျပါးကွီးတှကေို အနောကျဘကျကို အတငျးကော့ပဈပေးထားတယျ ။ တငျကွီးကွီးဆျောတှကေို ကုတငျဇောငျးမှာ ထောကျ ပီး လိုးရတဲ့ အရသာ ဘယျလို လဲ ဆိုတာ ပွောမပွတတျအောငျပါပဲဗြာ။ ခနနတေော့ မစုက ခန်ဒာကိုယျကို မတျမတျရပျလိုကျတော့ စောကျဖုတျထဲက ကြှနျနေျာ့ လီးကွီး က အပွငျကို ဘှတျကနဲ ထှကျလာတယျ ။ မစုက ကြှနျနေျာ့ ကို ကြောပေးပီး ကုတငျပျေါကို တကျလိုကျတယျ ။ပီးတော့ ကြှနျနေျာ့ကို လှညျ့ကွညျ့ပီး လကျညိုးလေး ထောငျက ကှေးဆနျ့လုပျပီး ကြှနျနေျာ့ ကို ဖိတျချေါတယျ ။ ပီး တော့ သူ့ရဲ့ ဘရာစီယာ ကို လကျနောကျပွနျလုပျပီး ခြိတျတှေ ဖွုတျခလြိုကျတယျ … အားးးး မိုကျလိုကျတဲ့ နောကွီးတှေ လုံးခဲနတော ပဲ ဗြာ ။ ကြှနျတျော လညျး ကုတငျပျေါတကျပီး လကျတဘကျက သူ့ ခေါငျးကိုကိုငျပီး အသာမော့ကာ နုတျခမျးကို စှဲစုပျရငျး လကျ တဘကျက နို့သီးကွီးကို ဖဈြညှဈကိုငျစုပျနပေေးလိုကျတယျ ။ မစုကော ကြှနျနျော ကော ကုတငျပျေါမှာ ဒူးထောကျလြှကျ ပဲ ။ မစု လကျတဘကျက လညျး ကြှနျနေျာ့ လီးတံကွီး ကို ကိုငျကာ ရှတေို့းနောကျဆုတျ ပှတျစှဲပေးနတေယျ ။ ခနနတေော့ မစုက နမျးနတော ကို ရပျလိုကျပီး ကြှနျနေျာ့ လီး ကွီး ကိုကွညျ့တယျ ။ပီးတော့ လီးပျေါကို တံတှေး ပဈြကနဲ့ ထှေးခလြိုကျပီး လီးကွီးကို ဂှငျးထုပေးနေ တော့တယျ။ ကြှနျနေျာ့ လီးကွီးပျေါမှာ မစု တံတှေးတှေ ကော စောကျဖုတျရညျတှေ ကော ဖွငျ့ စီးတှဲပွောငျလကျနတေယျ ။ မစု တံတှေး တှကေ လီးတံကနတေဆငျ့ ဂှဥေ တှေ ဆီပါ စီးကလြာတယျ
မစု ပတျလကျလှနျလိုကျနျော အငျးးး မစု ကုတငျပျေါမှာ ပကျလကျလှနျ ပျေါကားပေးထားတယျ ကြှနျတျောလဲ မစုရဲ့ ပေါငျကွားထဲ ကို ကိုယျလုံး ဝငျလိုကျပီး စောကျဖုတျပျေါလီးတငျလိုကျတယျ ။ စောကျဖုတျမှေးတှကေ မထူမပါး ရိတျပီးကာစ ပွနျထှကျလာပုံရ တယျ ။ ဒါနဲ့ ကြှနျနျောလဲ အဖုတျပျေါမှလီး ကို လကျနဲ့ ကိုငျပီး စောကျဖုတျကို လေးငါးခကျြ တဘကျဘကျ ရိုကျလိုကျတယျ ။ စောကျ ဖုတျနဲ့လီးရိုကျသံကွောငျ့ ကြှနျနေျာ့လီး က ပိုတောငျလာသလို ထငျရတယျ ။ မစုက သူ့စောကျဖုတျ ဘေးနုတျခမျးသားလေးတှကေို လကျညိုး နဲ့လကျခလယျ လေးသုံးပီး အသာဖွဲလိုကျတော့ အစိပွူပွူ လေး ထှကျလာတယျ ။ ထှကျလာတဲ့ အစိပွုပွူလေး ကို ကြှနျနျော လီးဒဈ နဲ့ အသာ ပှတျဆှဲလိုကျတာ မစုထံမှ ညီးညူသံ ခပျပွငျးပွငျးထှကျလာတယျ ။ အားးးးမောငျ…ဖိုးဇျော ကောငျးတယျ ကှယျ မောငျလေး အားးးး အငွးးးးအားးးး မောငျလေး ဖိုးဇျော ထညျ့လိုကျတော့ကှာ ပွောလဲပွော ကြှနျနေျာ့ လီးတံကွီး ကို လကျနဲ့ လာကိုငျပီး အဖုတျဝ မှာ ဒဈတပေ့ေးတော့တယျ ။ ကြှနျနျောလညျး မစုပေါငျနှဈခြောငျး ကို အားပွုကိုငျရငျး လီးကို စောကျဖုတျထဲ ထိုးသှငျးခလြိုကျတယျ
အားးး ဝငျသှားပီ မောငျလေး အားးးကောငျးတယျကှယျ လိုးပါနျော အားးးး ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ အဖုတျအတှငျးမှ လအေံသညျ့အသံမြား ဆီးခုံခညျြး ရိုကျခတျသံမြား ပွနျလညျဆူညံလာတော့တယျ ။ အားးးမောငျရယျ ကွိုကျ တယျကှာ လိုးပါနျော စောငျ့လိုးပေး ထိတယျကှာ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ကွိုကျရဲ့လား မစု ကွိုကျတယျကှာ မောငျ ပကျလကျလှနျပေးကှာ မ အပျေါက တကျစောငျ့ပေးမယျ အငျး လုပျလေ..မ ကြှနျနျော ပကျလကျလှနျလိုကျတယျ ။ မစုက ကြှနျနေျာ့ ပျေါ တကျခှပီး အဖုတျကို တံတှေးစုတျပီး လီးတံကို အဖုတျဝ မှာ တကေ့ာ ထိုငျခလြိုကျတယျ ။။ အားးးးကောငျးတယျ မရယျ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ကြှနျနေျာ့ ရငျဘကျပျေါ လကျထောကျက အပျေါမှ အားရှိပါးရှိ တကျစောငျ့တော့တယျ ။ ကြှနျနျော လညျး မစု တငျပါးကွီး နှဈခွမျးကို ကိုငျကာ အောကျမှ ပငျ့စောငျ့ပေးလိုကျတယျ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ကွီးမား တငျးရငျးနတေဲ့ ဖငျသားကွီးတှကေို ပှတျပေးနရေတာ အားရစရာ။ မစုက လညျး အပျေါမှ အဆကျမပွတျ စောငျ့ခပြေးနတေယျ ။ ကြှနျတော့ လကျတဘကျက တငျပါးကွီးတှကေို ပှတျရငျး တငျပါး အကှဲကွောငျးမှ တဆငျ့ မစု ဖငျဝ လေးအား လကျခလယျလေး ဖွငျ့ ပှတျပေးနမေိတယျ ။
ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ အားး ကောငျးလားမောငျ ကွိုကျရဲ့လား ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ အငျး..ကွိုကျတယျ မရယျ …မောငျပီးတော့မယျထငျတယျ အားးးး အငျး မောငျပီးခငျြပီးလိုကျလေ …အားးးသုတျရညျတှေ ထုတျပဈလိုကျအားး မ စကျ ပတျထဲ လီးရညျတှေ သှငျးလိုကျပါ… ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ အခကျြ ၂၀ လောကျ စောငျ့ပေးပီး ကြှနျနျော မနနေိုငျတော့ မစု စောကျပတျထဲ ကို အောကျကနပေငျ့ပီး လီးရညျတှေ ပနျးထုတျမိတော့တယျ ။။ အားးးးကောငျးလိုကျတာ မောငျရယျ …ခဈြသှားပီကှာ စကျပတျ ကွီး ကို လီးအဆုံးထိ ဖိခရြငျး ကြှနျနေျာ့ လီးရညျတှကေို ခံယူကာ ကြှနျနေျာ့ပျေါမစု ကိုယျလုံးကွီး မှောကျလြှကျသားကလြာတော့တယျ ။။။။ အဲ့ဒီနကေ့ ကြှနျနျော နဲ့ မစု နလေ့ညျ သုံးနာရီလောကျထိ ငါးခြီလောကျ လိုးဖွဈကွတယျ ။ အိမျထောငျသညျ မစု က ကြှနျနေျာ့ ကို သူ့ရဲ့ အိမျထောငျသညျ ဘ၀ ကြှမျးကငျြမှုတှေ ကို တကှကျခငျြး ပွပေးသှားတယျ ။ အဲ့ဒီနောကျပိုငျး ကလေးမူကွို ပို့ပီးခြိနျ ညဘကျကလေး အိပျခြိနျမြားမှာ မစုနဲ့ ကြှနျတျော ထငျတိုငျး ကြဲခဲ့ကွတယျ ။ မစု ကို ကြှနျနေျာ့ အကိုရဲ့မယား ဆိုတာတောငျ မခေ့ငျြခငျြ ဖွဈသှားတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ အကို ကလညျး နယျတခါဆငျးရငျ သုံးလေးပါတျကွာတတျတာ မို့ အေးအေးဆေးဆေး ကဲခငျြတိုငျးကဲ နမေိတာ ပါပဲ။
( စကားခြီး.. ဇာတျလမျး အသှားကောငျးအောငျလို့ ကြှနျတော့ အကိုကို နယျကို တဈလလောကျ အလုပျသှားလုပျခိုငျးလိုကျတယျ နျော ) ညဘကျတှဆေို မစုက ကြှနျနေျာ့ အခနျးမှာပဲ လာအိပျတတျတာ မြားတယျ ။ နလေ့ညျပိုငျးတှေ မှာ တော့ သိပျမလုပျဖွဈဘူး ကြှနျနျော က အလုပျသှားရတာ ဆိုတော့ ညဘကျ ကလေး အိပျခြိနျ ကတော့ အခြိနျမှနျလုပျဖွဈတာ မြားတယျ ။ ဒီလိုနဲ့ တဈပတျ လောကျအကွာ စနနေ့ေ့ အလုပျပိတျရကျ မနကျဆယျနာရီလောကျပေါ့ အိမျရှေ့ ကို ကားတဈစီး ဆိုကျလာတယျ ။မောငျလေး ဖိုးဇျော ခွံတခါး ဖှငျ့ပေးလိုကျပါဦး မ သူငယျခငျြး လာတာပါ ကြှနျနျော ခွံတခါးနားအရောကျ Honda Fit အဖွူရောငျလေး အတှငျး မှ မစု အရှယျ အမြိုးသမီးတဈယောကျ ကွှကွှရှရှ လေး ဆငျးလာတယျ ။ တဈယောကျတညျး ကားကို ကိုယျတိုငျ မောငျးလာတာ ။ ကြှနျတျောက ကားမောငျးရတာ ဝါသနာ ပါတာ မို့ ကားကို သခြော စိုကျကွညျ့မိနတေုနျး တံခါးဖှငျ့ပေးဦးလေ.. အထဲကို လူဝငျမှာ ကားဝငျမှာ မဟုတျဘူး သွျော…ဟုတျ..ဟုတျကဲ့အမ ကားလေးက လှလို့ ကွညျ့နမေိတာ တံခါးဖှငျ့မို့မသှေ့ားတယျ သွျော..အျော ..ကားလေးက လှလို့ ဆိုတော့ လူက တျောတျော အရုပျဆိုးနလေို့ဖွဈမယျ အဲ… အခုမှသခြောကွညျ့မိတော့ လူက ကားထကျပိုလှ တာပဲ …ဟီးးးး
သှား ၃၂ ခြောငျးပျေါအောငျဖွီးပွရငျး ခွံတံခါး ဖှငျ့ပေးလိုကျတော့ ကြှနျနေျာ့ ဘေးကနေ အသာထှကျသှားပီး အိမျပျေါတကျသှားတယျ ။ ရမှေေးနံ့ ခြိုအီသငျးသငျး လေး ဘေးမှာကနျြနရေဈခဲ့ပီး သူမရဲ့ နောကျကို သခြောကွညျ့မိလိုကျတယျ ။စကပျဒူးဖုံး နကျပွာရောငျနှငျ့ အပျေါအကြီ ဂြိုငျးပွတျလေးဖွငျ့ လှပလှနျးနတေယျ ။ ဂြိုငျးပွတျ အကြီကွောငျ့ လကျမောငျးသားလေးမြားမှာ ဆငျဆှယျလေး မြားအလား အဖှေးသားပျေါလှငျနတေယျ။ ဘယျဘကျခွကေငျြးဝတျ အထကျမှာ ရှရေောငျ ခွကေငျြး လေး က ခွသေလုံး အဖှေးသားလေးမြားနဲ့ လိုကျဖကျညီလှနျးလှတယျ။ မစု ထကျတောငျ ပွညျ့တငျးလှတဲ့ တငျအစုံ နဲ့ လှုပျလီလှုပျလဲ လြောကျသှားတာ တံတှေးတောငျ မြိုခမြိတယျ ။ သွျော ..Honda Fit ကားလေးထကျတောငျ တငျးတငျးရငျးရငျး ရှိလှပါလား ။ သူ့ နောကျကြောဘကျကိုကွညျ့နတော ကို သိသယောငျယောငျ နောကျကြောမှာ ခထြားတဲ့ ဆံပငျလေးကို တောငျ ခါရမျးသှားလိုကျ သေးတယျ ။ မကျြစိထဲမှာ ထကျထကျမိုးဦး ရဲ့စံပယျပနျးရနံ့လေးသငျးကွူနေ ဆိုတဲ့ Beauty shampoo ကွျောငွာလေးကိုတောငျ ပွေးမွငျမိတယျ။ နောကျကို တော့ ပွနျလှညျ့မကွညျ့.. ကြှနျနျော လညျး ခွံထဲမှာ ပဲ ကနျြခဲ့ပီး သဈပငျလေး တှေ ရလေောငျး ဘို့ လုပျ နလေိုကျတယျ ။
ဟဲ့ စုစု နကေောငျးလား မတှတေ့ာ ကွာလို့ လှလာတယျနျော အံမယျ ညညျးက မှ ပိုလှလာတာပါနျော ဘယျလိုလဲ စီးပှားရေးတှေ အဆငျပွနေတေယျထငျပါ့ ပွပေါတယျ မပွတောက တဈခုတညျး ညညျးကို ဖုနျးထဲက ပွောထားတဲ့ အတိုငျးပေါ့ မပွတော တဈခုပဲ ရှိတယျ အခုတောငျညညျး ဖုနျးဆကျလို့ လာခဲ့တာ အဆငျပွမေယျမလား ခုနက ငါ အိမျပျေါတကျလာတော့ နောကျက လှမျးကွညျ့ နရေဲ့လား ကွညျ့နတောမှ မကျြစိတောငျ ကြှတျကမြတတျပဲ .. ဘယျလိုလဲ ငါ့မတျကလေး လနျးရဲ့လား ငါပညာအစုံသငျပေးထားပီး ပီ ညညျးဘို့ တျောပါ ကောငျမ ညညျးဘို့ ညညျးဘို့ နဲ့ ကြောငျးတုနျးကလဲ ညညျးဘို့ညညျးဘို့ ဆိုပီး သူခညျြး စားစားသှားတာ မသိပဲ နမေယျ မှတျလို့လား မစု နဲ့ ဇာဇာ က ကြောငျးတုနျးထဲက သူငယျခငျြးတှေ ပှခေဲ့ရှုပျခဲ့ကွတာလဲ အတူတူ .. ကြောငျးကတညျးက ဘဲ တဈပှကေို အတူတူ လိုကျပီး နခေဲ့ဖူးကွတဲ့သူတှေ ပွောမနာ ဆိုမနာ ။ အခု ဇာဇာက ဘောစိ တဈယောကျနဲ့ လကျထပျပီး တောငျ ကွီးမှာ နတေယျ ။ ဘောစိက အသကျကွီးကွီး ရှမျး လူမြိုးတဈယောကျ ။
အခု ဇာဇာ က မစုတို့ မွို့ကို တဈယောကျတညျး သီးသနျ့ လာလညျတာ ။ အဘိုးကွီးဆီ ခှငျ့တိုငျပီး သူငယျခငျြးဆီ သှားလညျမယျ ပွောတုနျးက မစုဆီကို ပါ အဘိုးကွီးက ဖုနျးလှမျးဆကျမေး ပီး တော့ မှ ခှငျ့ပွုလိုကျတာ ။ ဒါတောငျ ဒရိုကျဘာ တဈယောကျထညျ့ပေးလိုကျတာ ဒီရောကျမှ ဒရိုကျဘာ ကို ပွနျလှတျလိုကျတာ ။ လောလောဆယျတော့ ဇာဇာ တဈယောကျတညျး ဟိုတယျမှာ တညျးတယျ ။ ဒီကို လာရတဲ့ အကွောငျး အရငျးကတော့ မစုရဲ့ မတျ ကလေး ဖိုးဇျော အကွောငျး ကို မစုက ပွောပွလို့ ။ အစ ကတော့ မစု က သူဖွဈပကျြခဲ့တာလေး တှေ ရငျဖှငျ့ပွခဲ့တာ အဲ့ဒီမှာတငျ ဇာဇာ က လညျး အဘိုးကွီးနဲ့ နရေတာ ပငျြးလာပီ လာလညျမယျ ပီးတော့ ဖိုးဇျော နဲ့လညျး ခြိတျပေးဘို့ပွောတော့ မစုလညျး သဘောတူ လိုကျပီး ဂှငျဖနျပေးတဲ့သဘော။ အတှငျးသိ အစငျးသိ သူငယျခငျြးမြား ဖွဈတာက တဈကွောငျး တခါတရံ မစု တို့ ငှရေေးကွေးရေး အခကျအခဲ ဆို လကျမတှနျ့တတျတဲ့ သူငယျခငျြး တဈယောကျ ဖွဈတဲ့ အတှကျက တဈကွောငျး ဇာဇာ က မတျ ကလေး နဲ့ ကိစ်စ စိတျဝငျစားကွောငျး သူလညျး စမျးကွညျ့ခငျြသညျဟု ဆိုလာသဖွငျ့ အခု လို ဂှငျဖနျပီး အိမျသို့ အလညျ ချေါလိုကျ ခွငျးလညျး ဖွဈတယျ။ အဲ့ဒီ အကွောငျးတှကေ ကြှနျနျော နောကျမှ သိခဲ့ရတာပါ ။ မစုပွောပွလို့။
မောငျလေး …ဖိုးဇျော ခန.. ဟုတျကဲ့ လာပီး မစု ကြှနျနျော အိမျပျေါရောကျတော့ သူတို့ နှဈယောကျ ဧညျ့ခနျးမှာ စကားထိုငျပွောနေ တယျ လာ မောငျလေး ဖိုးဇျော ..ဒါ မစု ကြောငျးနဘေကျသူငယျခငျြး ဇာဇာ တဲ့ တောငျကွီးမှာ နတေယျ အခု အလုပျကိစ်စ နဲ့ ရောကျ နတော အိမျကိုလာလညျတာ.. ဒီအတောအတှငျး သူသှားခငျြတဲ့ နရောတှေ မောငျလေး လိုကျပို့ပေးဘို့ အကူအညီတောငျးနလေို့ မောငျလေး အဆငျပွမေလားလို့ ဟားးး အဆငျပွတောပေါ့ ကြှနျနျောလညျး ကားမောငျးခငျြနတောနဲ့ အတျောပဲ အျော.. ဖိုးဇျောက ကားမောငျးရတာ ဝါသနာ ပါတာလား ဟုတျကဲ့ မဇာဇာ ကြှနျနျော က ဆယျတနျးဖွပေီးကတညျးက ကားမောငျးသငျထားတာ ကားပိုငျမရှိတော့ မမောငျးဖွဈဘူး သူငယျခငျြး ကားတှတေော့ လိုကျလိုကျ မောငျးပေးတယျ ရပါတယျ အမ ကို မဇာ လို့ ပဲ ချေါပါ ရငျးရငျးနှီးနှီးပေါ့ ဟုတျကဲ့ မဇာ ကဲ ဒါဆို အဝတျအစားသှားလဲ ဒီမွို့က အထငျကရနရောတှေ အကုနျလိုကျပို့ရမယျနျော ဟုတျကဲ့ ကဲ..အေးဆေးသှားကွ သူငယျခငျြး ပွနျလာဖွဈရငျ ဖုနျးဆကျလိုကျ အိုခေ ကြှနျနျော နဲ့ မဇာ တို့ နှဈယောကျသား မွို့ ထဲ အထငျကရ နတှေေ ဘုရားတှေ အကုနျလိုကျပို့ နလေ့ညျစာ ကို မွနျမာထမငျးဆိုငျမှာ ပဲ စားဖွဈတယျ ။
လြောကျလညျကွ စကားတှပွေောကွ ဖွငျ့ ကြှနျနျော နဲ့ မဇာ တျောတျောရငျးနှီးလာတယျ ။ သူ့ အကွောငျး ကိုယျ့ အကွောငျးတှပွေောကွပေါ့ ။ကြှနျနေျာ့ အကွောငျး က သိပျမပွောဖွဈ မဇာကတော့ သူက ခမျြးသာတဲ့ သူနဲ့ အိမျက ပေးစားလို့ လကျထပျလိုကျရကွောငျး သူ့ထကျအသကျ၂၅ နှဈခနျ့ ကွီး တဲ့သူနဲ့ လကျထပျလိုကျရတဲ့ အတှကျ အိမျထောငျရေး အခကျအခဲတှေ ရှိကွောငျး သားသမီးလညျးမထှနျးကားခဲ့ကွောငျး စီးပှားရေး အဆငျပွနေပေမေယျ့ အေးစကျတဲ့ အိမျထောငျရေး ကို ဖွတျသနျးနရေကွောငျး အရမျးအထီးကနျြဘို့ကောငျးကွောငျး တှေ ပွောပွတယျ ။ သူယောကြားက အခု အသကျ ၅၈ ထဲရောကျရှိနပေီး မဇာက ၃၃ နှဈသာ ရှိသေးသညျ။ ကြှနျနျောက အသကျ ၂၇ ကြျောဆိုတော့ မဇာနဲ့ ကြှနျနျော အသကျ ငါးနှဈကြျောကြျော လောကျသာကှာသညျ။ကြှနျနျော နဲ့ ရငျးရငျးနှီးနှီး စကားတှေ ဖောငျဖှဲ့ ဘုရားပျေါ အတကျလှကေားလေးမြားတှငျ ကြှနျနေျာ့ လကျမောငျး ကို မှီတှဲ လာတယျ ။ မဇာ ဆီမှ ရမှေေးနံ ခြိုအီအီ လေးက ကြှနျ နေျာ့ ရဲ့ စိတျတှေ ကို ဆှဲဆောငျနသေလိုပဲ ။ဘုရားပျေါ လကျလြောကျတဲ့ အခါတောငျ ကြှနျနေျာ့လကျကို တှဲထားသေးတယျ ။ မဇာရဲ့ ဆံပငျမှ ရှနျပူရနံသငျးသငျးလေးကလညျး လတေိုကျလို့ ဆံပငျလေးတှေ ကြှနျနေျာ့ဘကျ ဝဲဝလေ့ာတိုငျး ရှူရှိုကျမိတယျ ။
ညနလေေးနာရီလောကျကတြော့ မဇာက ဟျောတယျပွနျပီး ရခြေိုး ခနနားပီး မှ မစု တို့ အိမျကို ပွနျဘို့ ပွောလာတာနဲ့ မဇာတညျးတဲ့ ဟိုတယျလျ ကို မောငျးလာခဲ့လိုကျတယျ ။ ဟိုတယျလျရောကျတော့ မဇာ အခနျးထဲ လိုကျလာဘို့ ချေါတယျ ဟိုတယျလျ က ကောငျလေး ကို လညျး မုနျ့ဘိုး ပေးလိုကျတာ တှတေ့ယျ ။ တကယျဆိုရငျတော့ ဧညျ့သညျတှကေ တညျးခိုသူတှေ အခနျးကို လိုကျလို့ မရ။ မဇာတညျးတဲ့ အခနျးက ဘနျဂလို လုံးခငျြး အခနျးလေး အထဲမှာ နှဈယောကျအိပျကုတငျကွီး နှဈခု တီဗီ ရခေဲသတ်ေတာ အဲ့ကှနျး ရခြေိုးခနျး ရပေူရအေေး အပွညျ့အစုံ ဆကျတီတှေ စာရေးစာပှဲတှပေါ ပါတယျသေးတယျ ။ ဒီလို အခနျးမြိုး အခု မှ ကြှနျနျော ရောကျဖူးသညျ။အခနျးထဲ ရောကျတော့ ဖိုးဇျော လှဲခငျြလှဲလေ အမ ရခြေိုးလိုကျဦးမယျ ရတယျမဇာ ကြှနျနျော ဆကျတီ မှာပဲ ထိုငျ စောငျ့တော့မယျ မဇာ က တယျလီဖုနျး ကို နှိပျပီး စားသောကျစရာတှေ မှာတယျ ပီးတော့ ခုန က အဝတျအစားအတိုငျး ပဲ ရခြေိုးခနျး ထဲ ဝငျသှားတယျ ။ ကြှနျနျော တီဗီ ထိုငျးကွညျ့ရငျး စောငျ့နတော ခနနတေော့ အခနျးတံခါး ခေါကျသံ ကွားလို့ သှားဖှငျ့လိုကျတော့ ဝိ တျတာ ကောငျလေး တဈယောကျ အစားအသောကျ ဗနျးကွီး ကိုငျပီး စားစရာတှေ လာပို့တာနဲ့ ယူထားပီး ဆကျတီပျေါမှာ တငျထား လိုကျတယျ ။
မောငျလေး ပငျြးနပေီလား ..´´ စကားသံနှငျ့ အတူ ရခြေိုးခနျး အတှငျးမှ တဘကျအဖွူကွီးပတျ ကာ မဇာ လှမျးထှကျလာတာတှေ့ လိုကျရတယျ ။ ရပါတယျ မဇာ … မဇာ အရမျးလှတာပဲ ´´ မဇာ ပေါငျတံ ဖှေး ဖှေး ကွီးတှကေို ကွညျ့ရငျးပွောလိုကျတယျ ဟု တျလားး တကယျလား မွှောကျတာလား မမွှောကျလဲ မောငျလေး စားခငျြတာ ကြှေးမှာပါနျော ´´ မဇာ စတေနာ ရှိတာ ကြှေး ကုနျ အောငျ စားပါ့မယျ´´ ကြှနျနျော မဇာနားကို တိုးကပျသှားလိုကျတယျ ။ ရခြေိုးခနျးက ထှကျခါစ သငျးပြံ့ပြံ့ ဆပျပွာရနံတဈခု ရှူရှိကျမိ တယျ ။ စိတျထဲ လနျးဆနျးသှားသလိုပဲ ။ မဇာ မကျြနှာပျေါ ပုံခုံး ပျေါတို့ မှာရစေကျကလေး တှနေဲ့။ မဇာ ပုခုံးပျေါကို လကျတဘကျ တငျလိုကျပီး နောကျလကျတဘကျက တဘကျပတျထားတဲ့ တငျပါးပျေါ ကို တငျလိုကျတယျ ။ မဇာ က အလိုကျသငျ့ မြှောပါလာ တယျ ။ ကွညျ့စမျးပါဦး ခြောခြောလှလှ ဖွူဖွူဖှေးဖှေး သူဌေးဇနီးလေး တဈယောကျ ဟာ ကြှနျနေျာ့ ရငျခှငျ ထဲ ရောကျနပေီလေ ။ ကြှနျတျော ဘယျလောကျ ကံကောငျးလိုကျသလဲ ။ မဇာ လညျဂုတျသားလေး ကို အသာငုံကာ နမျးလိုကျတယျ ။
မောငျ….´´ တိုးတိုးညှငျးညှငျး လသေံလေး တဈခု ကြှနျနေျာ့ နားထဲ ဖွတျပွေးသှားတယျ ဟငျ…မဇာ ဘယျလို ချေါလိုကျတာလဲ ´´ နုတျခမျးလေး လှုပျရုံ ပွုံးပွပီး မောငျ …လို့ ချေါလိုကျတာလေ ´´ နားဝငျ ခြိုလိုကျတာ မ ရယျ ´´ ဒီနေ့ ည မောငျ မ ကို အဖျော ပွု ပေးနျော ´´ မဇာရဲ့ နုတျခမျးလေး ကို ဆှဲ စုပျလိုကျရငျး ရငျဘကျ ပျေါ မှာ ခညျြနှောငျထားတဲ့ တဘကျစလေး ကို ဖွခေလြိုကျတယျ ။ မဇာ လညျး ကြှနျနေျာ့ ခါး ကို တငျးကွပျစှာ ဖကျလာရငျး ကြှနျနေျာ့ ကို ခပျပွငျးပွငျး အနမျး တှေ ပွနျလညျ တုနျ့ ပွနျလာသလို မဇာ ပေါငျဂှကွားက ကြှနျနေျာ့ ပျေါ ကို တိုးဝငျလာပီး ပှတျဆှဲလာတယျ။ ကြှနျနေျာ့ ဝတျတှေ ကို အလြှငျအမွနျ ပဲ ဆှဲ ခြှတျပဈလိုကျတယျ ။ ခုဆိုရငျ ကြှနျနျော နဲ့ မဇာ ကိုယျလုံးတီး ဖွငျ့ နှဈယောကျသား မတျတပျရပျလြှကျ အနမျးတှေ ကို ခြိုမွိနျစှာ သောကျသုံးနတေယျ။ ဆယျမိနဈလောကျ အနမျးယာဉျကွောမှာ မြောခဲ့ပီး ကြှနျနျော မဇာ ကိုယျလုံးလေး ကို ပှလေို့ကျတာ ကုတငျပျေါ အသာခလြိုကျတယျ ။ ကုတငျပျေါ မှာ ပကျလကျကလေး လနျနတေဲ့ မဇာ နို့သီးတှကေိုခရြေငျး ကုတငျအောကျနားမှာ ဒူးထောကျလိုကျကာ နို့သီးတှေ ကို စှဲ စို့ပဈလိုကျတယျ အားးးး မောငျရယျ …´´
ကြှနျနေျာ့ လကျတဘကျက မဇာ ရဲ့ အဖုတျပျေါ သို့ လှမျးတငျလိုကျတယျ ။ အဖုတျက ဖောငျးကားနပေီး ရခြေိုးပီးကာစ ဖွဈနတော တောငျ နှေးအိနတေယျ ။ အဖုတျကွားလေး ထဲကို လကျထိုးထဲလိုကျခြိနျ လကျခလယျဟာ ခြောမှစှေ့ာ ဝငျသှားတယျ အားးးး ´´ မဇာ ပေါငျတံကွီးတှေ ဘေးသို့ ပိုကားလာပီး ဒူးနှဈခြောငျးကလညျး ထောငျလာတယျ တငျပါးကွီးတှဟောလညျး အပျေါ ကို မွောကျ မွောကျ တကျလာတယျ အားးး မောငျ မောငျ ´´ ကြှနျတျော လကျခလယျ တဈခြောငျး တညျးသာထညျ့ပီး ကလိ နရောမှ လကျနှဈ ခြောငျးပူးထညျ့လိုကျတယျ လကျမ က စောကျစိ ကို ပှတျရငျး လကျညိူးလကျခလယျ နှဈခြောငျး ပူးဖွငျ့ အတှငျးထဲကို မှနှေောကျ ပေးလိုကျတယျ ။ နို့သီးတှကေို စုပျနတောလညျး မပွတျ ။ အားးး မောငျ … ဇာ အရမျးကောငျးနပေီ အားးး ရှီးးးး ´´ ဖောကျ ဖောကျ ပလောကျ ပလောကျ ´´ ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ ´´ ဖောကျ ဖောကျ ဖောကျ …´´ အားးး မောငျ … အားးးရှီးး ´´ ဖောကျ ဖောကျ ပလောကျ ကလောကျ ´´ ဆယျမိနဈလောကျ ဆကျတိုကျ လကျညိူးလကျခလယျ နှဈခြောငျးပူး လုပျလိုကျရာ မဇာ တငျပါးကွီးတှေ အပျေါ ကို မွောကျ တကျလာပီး အဖုတျ အတှငျးမှာ အရညျစိုစို တှပေိုထှကျလာကာ တငျပါးကွီး တှေ ပွနျကသြှားတယျ
မဇာ ပီးသှားလားး ´´ ခေါငျးလေး ညိမျ့ရုံသာ ညိမျ့ပွ ရှာတယျ လကျနဲ့ ပဲ လုပျရသေးတယျ ပီးသှားတာလား ´´ မောငျ လကျက လညျး ကြှမျးကငျြတာကိုးးး ´´ အငျးးး ဒီတခါ မောငျ့ အလှညျ့နျော ´´ အငျးး ပွောလေ မောငျ ဇာ ဘာလုပျပေးရမလဲ ´´ မဇာ စကျ ပတျ ကို ကိုငျထားတဲ့ ကြှနျနေျာ့ လကျမှ လကျညိုးလေး ကို မဇာ နုတျခမျး ပျေါ တငျပီး နုတျခမျးလေး ထဲ ထိုးသှငျးလိုကျတယျ စုပျ လိုကျ ´´ ပွှတျ ပွှတျ …´´ ငံတယျ ´´ မောငျ့လီး ကို ကော စုပျပေးပါလား ဖွဈတယျ မလား ´´ အငျးးး ဖွဈတာပေါ့ သိပျဖွဈ ´´ ပကျလကျ လှနျနရော မှ ထထိုငျကာ ကြှနျနေျာ့ လီး ကို လာကိုငျတယျ ကြှနျနျော လညျး ကုတငျဘေးမှာ မတျတပျရပျလိုကျတယျ ။ မောငျ့ လီးက အကွီးကွီးပဲနျော ´´ ဆယျတနျးကတညျးက ဂှငျးတိုကျပီး ကွီး အောငျ လုပျထားတာ ´´ ဟိဟိ တကယျ ´´ အငျး ပေါ့´´ ကြှနျနေျာ့ လီးတံအပျေါမှ အရညျပွား ကို ဆှဲ လှနျလိုကျတယျ ရော့ ဒဈ ကို အရငျ ယကျပေးနျော ´´ ကြှနျနေျာ့ စကားတောငျ မဆုံးလိုကျ ကြှနျနေျာ့ ဒဈဖူး ပျေါနုတျခမျးလေး ရောကျလာတယျ ။ ပီးတော့ ဒဈဖြားလေး မွုပျရုံ နုတျခမျးလေး ထဲ ဝငျသှားတယျ ။ အားးးး နှေးနတောပဲ ကောငျးလိုကျတာဗြာ ကုတငျပျေါမှာ ခွထေောကျလေး တှဲလောငျးခထြိုငျကာ ကြှနျနေျာ့ လီးကို စစုပျတော့တယျ ။
ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ´´ အ..အားး အ´´ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ´´ အားး ဟုတျတယျ လီးဒဈကို လြှာ နဲ့ မှပေေး အားး´´ ပွှတျ ပွှတျ ပလကျ ပလကျ ´´ အားး ကောငျးလိုကျတာ မောငျ လီး အဆုံးထိ ငုံကွညျ့နျော ´´ ကြှနျနျော ပွောပီး လီးကို ပါးစပျထဲ အဆုံး ထိ ထိုးထညျ့လိုကျတယျ အာခေါငျကို သှားထောကျတယျ အူးးးးးအုအု …အု´´ လီးကို ပါးစပျထဲမှ အတငျးပွနျထုတျတယျ မကျြရညျ တှပေါ ဝိုငျးသှားတယျ ဆောရီးနျော စိတျလောသှားလို့´´ သှားးး မောငျက အတငျးကွီး လုပျတယျ အသကျရှူတောငျ အောငျ့တယျ ´´ဆောရီးနျော မောငျ လုပျခငျြပီကှာ တအား တောငျနပေီ ´´ အငျးးး ဘယျလိုနပေေးရမလဲ ပွောလေ ဇာလညျး အဖုတျထဲက တ အားယားနပေီ ´´ ကုတငျပျေါမှာ ကုနျးလိုကျ မောငျ အောကျကနေ မတျတပျရပျပီး လိုးမယျနျော ´´ အငျးးး ´´ မဇာ ကုတငျပျေါ မှာ လေးဘကျထောကျကုနျးကာ ဖငျကွီး ကို ကြှနျနေျာ့ ဘကျလှညျ့ပေးလိုကျတယျ အားးးပါးး အခုမှ သခြော ကှကျကှကျကှငျးကှငျး မွငျ လိုကျရတဲ့ မဇာ ရဲ့ တငျပါးကွီး ဖွူဖှနေတေဲ့ မြှဈစို့ကွီးအလား ။
မိနျးမ တငျပါးတှကေ ကုနျးလိုကျရငျ ခပျပိနျပိနျ မိနျးမတှတေောငျ တငျပါးက ကွီးလာသလို မြိုးထငျရတာ အခု လို မဇာရငျပွညျ့တငျးတငျး တငျပါးကွီးတှကေို ကုနျးလိုကျတော့ နောကျကို ကော့လနျ ထှကျကာ လုံးဝနျးနတေယျ ။ ခွနှေဈခြောငျးကို ခပျကြဲကြဲ ဟ ထားပီး ကုနျးထားတာ မို့ ဖငျကွားထဲမှ စအိုဝ နီညိုရောငျလေး နဲ့ အောကျက အဖုတျ အာအာ လေး က အတိုငျးသား နောကျကို စူထှကျလာသလိုပဲ ၊ ကြှနျနျောက မတျတပျ ရပျထားတာ မို့ ကြှနျနေျာ့ လီး နဲ့ မဇာ ဖငျတုံးကွီးက တတနျးတညျး အနအေထားမှာ ရောကျနတေယျ ။ ကြှနျနျော လကျတဘကျက မဇာ ရဲ့ အဖုတျကိုလှမျးကိုငျ လိုကျတယျ ။ နောကျတဘကျက တငျပါးကွီး ကို ပှတျကွညျ့လိုကျတယျ ခြောမှေ့ နတေဲ့ တငျပါးကွီးတှေ လုံးခဲအယျ နတောပဲ မဇာ စုပျထားလို့ တံတှေ တှေ ဖွငျ့ ပွောငျလကျနတေဲ့ လီးတံ ကို မဇာ ရဲ့ အဖုတျဝ မှာ အသာ တလေို့ကျတယျ
မဇာ လကျတဘကျက အဖုတျမှာ တထေ့ားတဲ့ ကြှနျနေျာ့ လီး ကို လာကိုငျကာ အဖုတျနဲ့ အထကျအောကျပှတျဆှဲလိုကျရငျး အဖုတျ အတှငျးသားထဲကို လီးဒဈမွုပျအောငျ ထိုးသှငျးလိုကျတယျ ။ ကြှနျနျော လညျး မဇာရဲ့ တငျပါး တဘကျတခကျြ ကို ကိုငျကာ ခါးကို ကော့ပီး လီးကို ထိုးသှငျးလိုကျတယျ အားးး မောငျ ဝငျသှားပီ ´´ ဗွှတျ .. ဘှတျ ဘှတျ ´´ ခကျြခငျြးပဲ ကြှနျနျော လီး ကို အဝငျအထှကျ မွနျမွနျဖွငျ့ နောကျကနေ စောငျ့လိုးပဈလိုကျတယျ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ´´ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ´´ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ´´ အားးးမောငျ အားးး ကောငျးးး ကောငျးးး´´ အငျး ရော့ အငျးးးးအားးးး ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ´´ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ´´ အားးး မောငျ ရေ…ကောငျးတယျ အားးးး ´´ လေးဘကျကုနျးထားရာမှ သမငျလညျပွနျဖွငျ့ ကြှနျနေျာ့ ကို လှမျးကွညျ့တယျ အားးးး အားးးမောငွ လိုးလိုးလိုးးးး´´ မဇာမကျြနှာမှာ ရာဂ စိတျတှေ အပွညျ့ …လကျနှဈဘကျ ထောကျထားရာမှ လကျတဘကျကို ကိုယျ့ဘာသာလညျး ပွနျပှတျနတေယျ ။ အားးး မောငျ လိုးကှာ.. အားးး ဇာ့ ကို လိုးကှာ´´ အငျးးးးလိုးနတေယျ ဇာ ရယျ ကောငျးရဲ့လားး အားးးဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ´´ အငျးးး ကောငျးတယျကှာ လီးတဆုံး စောငျ့လိုးပေးစမျးပါ အားးး ဒီလို မခံစားရတာ ကွာပီကှာ မောငျ့လီး အရမျး ကောငျးတာပဲ အားးး´´ တငျပါးတှကေို အတငျးဖဈြညှဈကာ ကြှနျနျော နောကျမှ စောငျ့စောငျ့ပီး လိုးနမေိတယျ
ကြှနျနေျာ့ ရဲ့ စောငျ့ ခကျြတှကေ တဖွညျးဖွညျး အရှိနျ ပိုပို မွနျလာသလို ကြှနျနေျာ့ ပေါငျနဲ့ မဇာ တငျပါးကွီးတှေ ရိုကျသံ ကလညျး အခနျးထဲ မှာ ဆူညံ ထှကျလာတယျ ဖောငျးးးဖောငျးးးဖောငျးးးဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ´´ အားးး မောငျရေ အားးး´´ တငျပါး ဝိုငျးဝိုငျး ဖွူုဖူ ကွီးတှကေို ကြှနျနျောလကျက ဖဈြညှဈထားတာ ကွောငျ့ တငျပါးမှာ ရဲစပျလာတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ ရဲ့ စောငျ့ခကျြတှကေ မွနျမွနျလာသလို မဇာက လညျး ရှေ့ မှနေ၍ နောကျပွနျ စညျးခကျြညီညီ ပွနျစောငျ့လာတယျ ။ အဖုတျထဲမှ အရညျတှကေ တဖွညျးဖွညျး ပိုမို စိုစှတျလာပီး ပေါငျဂှကွားသလို စီးကလြာတယျ ။ ရခြေိုးပီးကာစ မဇာရဲ့ ခါးလညျ လောကျမှာ ခြှေးစကျတှေ ထှကျလာသလို ကြှနျနေျာ့ နားထငျ ကွောမှလညျး ခြှေးတှေ ကဆြငျးလာတယျ ။ ဖောငျးးးဖောငျးးးဖောငျးးးဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ´´ အားးး မောငျရေ အားးး´´ ဖောကျ ဖောကျ ဖောကျ ´´ အားးး အ အားးး´´ အားး ရှီးးးး အားးး ကောငျးတယျ လိုးကှာ မညှာ နဲ့ စောငျ့လိုးပေးးးးး မဇာ ထပျပီးခငျြလာပွနျ ပီ ´´ အားးးးးး´´ “`ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ´´ အငျးးး မောငျလညျး ပီးတော့ မယျ အဖုတျထဲ ကို ထညျ့လိုကျတော့မယျနျော အားးး´´ အငျးးး ထညျ့လိုကျ အားးး ထညျ့ထညျ့ မောငျ့ လရတှေေ ထညျ့လိုကျပါ အားးး´´ အငျးးးးအငျးးးးအားးးး ထှကျ ထှကျ ကုနျပီ အားးး´´ အငျး အားးးးထညျ့ အားးးရှီးးးး ကောငျးတယျ မောငျ အားးး´´ ကြှနျနေျာ့လီးထိပျမှ သုတျရညျတှေ မဇာ စောကျဖုတျ အတှငျးသားထဲကို ခပျပွငျးပွငျး ပနျးထုတျပဈလိုကျတော့တယျ ။ အားးးး ကောငျးလိုကျ မ ရယျ ´´ ကြှနျနေျာ့လီး ကို ဆှဲ မထုတျသေး ပဲ စောကျဖုတျ ထဲမှာ သှငျးထားဆဲ မဇာ ကတော့ လေးဘကျထောကျထားရာမှ အောကျကို မှောကျကြ တော့မလိုလို ဖွဈနတော ကွောငျ့ တငျပါးကွီး တှကေို ဆှဲ ထိနျးထားလိုကျရတယျ ။ ခန နတေော့မှ ကြှနျနေျာ့ လီးတံ ကွီး ကို အပွငျဘကျကို ဆှဲ ထုတျလိုကျ တယျ
ပလှတျ …´´ ဖငျကုနျးထားတာကွောငျ့ ကြှနျတော့လရတှေကေ စောကျပတျ ထဲမှ ဖွေးဖွေးခငျြးအောကျကို စီးကလြာတယျ မဇာ တငျပါးကွီးတှကေို ဖွေးဖွေး ခငျြး ထိနျးပီး အောကျကို ခပြေးလိုကျတော့ မဇာ တဈယောကျ ကုတငျပျေါ မှောကျလြှကျသား ဖွဈ သှားတယျ ကြှနျနေျာ့ လီး ကတော့ နဲနဲ မပြော့တပြော့ ဖွငျ့ စောကျဖုတျရညျ လရညျ တှေ ပပှေလနျ နတေယျ ။ ကြှနျနျော လညျး ဘေး က ထိုငျခုံမှာ ခွပေဈလကျပဈ ထိုငျခလြိုကျတော့တယျ ။ ခန တဖွုတျ နားနပေီးတော့ ကြှနျနျော လညျး ရခြေိုးခနျးဝငျ ရခြေိုး မဇာက လညျး သူစောကျပတျ ကို သနျ့ရှငျးရေးလုပျ ပီးတော့ နှဈယောကျသား ဘီယာ နဲ့ ဝိုငျ ခှကျတိုကျပီး သောကျလိုကျကွတယျ ။ ကြှနျနျော တို့ နှဈယောကျသား အဲ့ဒီ ည တဈညလုံးမီးကုနျယမျးကုနျ ကဲပဈ လိုးပဈ လိုကျကွတယျ ။ ကြှနျနျော ငါးခြီလောကျ ပီးအောငျလုပျ လိုကျတယျ နောကျဆုံး ကြှနျနျော တို့ နှဈယောကျ ည ၂ နာရီလောကျမှာ အိပျပြျောသှားတော့တယျ ။ ကြှနျနျော မကျြလုံးပှငျ့လာတဲ့ အခြိနျ ဘေး ကိုကွညျ့လိုကျတော့ မဇာ မရှိတော့ ဘေးက ခေါငျးအုံးလေးပျေါမှာ စာလေး တဈစောငျ တှေ့ လို့ အိပျနရေငျးပဲ လှမျးယူ ပီး ဖတျလိုကျတယျ မောငျ ဇာအလုပျကိစ်စ နဲ့ အပွငျခန သှားတယျ နလေ့ညျ ၁၁ လောကျ ပွနျရောကျမယျနျော မောငျအိပျနတော ခဈြစရာလေး မို့ မနှိုးရကျတာ နဲ့ မနှိုးခဲ့တာ ခဈြတယျ ´´ နာရီကို လှမျးကွညျ့လိုကျတော့
ဟငျ… ဆယျနာရီတောငျ ထိုးပီးသှားပီ ကြှနျနျော တျောတျော အိပျပြျောသှားတာပဲ အိပျယာပျေါ မှ ထကာ ရခြေိုးခနျးဝငျပီး ရကေို ဝအောငျခြိုးပဈလိုကျတယျ ရခြေိုးပီးတော့ ဘိုကျထဲ ဆာသလိုလို ဖွဈလာတာ နဲ့ ရကျဆရှငျ ကို ဖုနျးချေါပီး စားစရာမှာစားပီး တီဗီ ထိုငျကွညျ့နတေုနျး ဒေါကျ ဒေါကျ ဒေါကျ ´´ အျော …မဇာ ပွနျလာပီအထငျဖွငျ့ တံခါး ကို ဆှဲ လှပျလိုကျရာ… မဇာ မဟုတျ …ကြှနျနေျာ့ မရီး မစုဖွဈနတေယျ ဟာ…မစု ဘယျလို ရောကျလာတာ…လဲ´´ အခနျးထဲ လှမျးဝငျလာပီး ဒီလိုပဲပေါ့ ´´ မစုက သူရဲ့ ပုံစံ အတိုငျး အပျေါက ဘလောကျဈ အကြီ လကျပွတျ နဲ့ အောကျက ထမိနျစကပျ အနကျရောငျလေး ပဲ ဝတျထားတယျ ။ လကျကိုငျ အိတျကို စာပှဲ ပျေါ အသာပဈတငျလိုကျပီး ကြှနျနေျာ့ ပါးကို တခကျြလာနမျးတယျ ကွညျ့စမျးပါဦး ငါ့မောငျ မကျြကှငျးတှတေောငျခြောငျကသြှားတယျ ဘယျလောကျတောငျ ကဲ လိုကျကွလဲ မသိဘူး ´´ အေးဆေးပါ မစုရဲ့ ဒီလောကျတော့ အပြော့ပါ ´´ မစုတငျပါးလေး ကို ကိုငျပှတျလိုကျပီး နုတျခမျးလေး ကို အသာ နမျးစုပျလိုကျတယျ ။ ကြှနျနျော ကုတငျပျေါ မှာ ထိုငျလိုကျတော့ မစုက ကြှနျတေျာ့ ပေါငျပျေါမှာ တကျထိုငျတယျ ။ ပေါငျပျေါကို ကရြောကျလာတဲ့ မစု တငျပါးကွီးတှကေ အိနတောပဲ ကြှနျနျော အသာကိုငျပှတျလိုကျပီး မစု ကြှနျနေျာ့ကိုလှမျးလို့လိုကျလာတာ လား ´´
ဒါပေ့ါကောငျစုတျလေး ရဲ့ ညက မောငျလေး မရှိတော့ အိပျလို့ တောငျ သိပျမပြျောဘူး သူကတော့ ကောငျးကောငျးဇိမျခံနတေယျပေါ့ ´´ မစု အလိုကြ မဇာ နဲ့ လာနပေေးရတာပါနျော မစုပဲ ကြှနျနေျာ့ ကို လှတျလိုကျပီးတော့ ´´ မစုက ကြှနျနေျာ့ပေါငျပျေါမှာ ထိုငျနေ တော့ သူ့ ရဲ့ နို့တှကေ ကြှနျနေျာ့ မကျြနှာ နဲ့ တတနျးတညျး ဖွဈနတေယျ ။ မစု ရငျဘကျနားမှ ရမှေေးနံ့ ခြိုအီသငျးသငျး လေး တခကျြ ရလိုကျတယျ မစုက ကြှနျနျော ခေါငျး ကို ကိုငျပီး သူ့ ရငျဘတျတှေ နဲ့ ကြှနျနေျာ့ ပါး ကို ပှတျဆှဲ လာတယျ ။ ကြှနျနျော လညျး ကြှနျနေျာ့ ပေါငျပျေါ ထိုငျနတေဲ့ မစုရဲ့ တငျပါးတှေ ကို ပှတျနရောက ပေါငျတံတှေ ကို ဖွေးဖွေးခငျြး ပှတျပေးရငျး ထမိနျစကပျအကှဲ ကွောငျးထဲ ကို လကျနှိုကျလိုကျပီး ပေါငျတှငျးသားလေးတှကေို ဖွေးဖွေး ခငျြး ပှတျပေးလိုကျတယျ ။။။ ပေါငျတံလေးတှေ တဖွညျးဖွညျး ကား လာပီး ပေါငျဂှကွား အလညျ သို့ အရောကျ အတှငျးခံ ပျေါ ကို ကိုငျမိလိုကျခြိနျ စိုစှတျနတေဲ့ အထိ အတှေ့ ။ မဇာ စိတျတှေ ပွငျးပွနေ ပီထငျတယျ ။ထမိနျစကပျ အကှဲ ကွောငျး ထဲ မှ လှမျးနှိုကျရသဖွငျ့ အဖုတျနရော ကို ထိထိ မိမိ ကိုငျမရ …
မောငျလေး ဖိုးဇျော …မစု မောငျလေး ကို စှဲနပေီကှာ´´ အငျးးးးဟငျးးးအငျးးးး´´ ဒေါကျ…ဒေါကျ…ဒေါကျ ´´ အဲ လခှမျးမှပဲ ဘယျ သူတံခါးလာခေါကျလဲမသိ မစုလညျး လနျ့ဖနျြ့ပီး ကြှနျနေျာ့ပေါငျပျေါမှ ဆငျးကာ ကုတငျပျေါ တှငျ ထိုငျလိုကျတယျ တံခါးပေါကျ ဖှငျ့ အပီး တံခါးရှတှေ့ငျ ရောကျနသေော မဇာ ကို တှလေို့ကျရတယျ အျော …မဇာ ဘယျသူမြားလဲလို့ မစုတောငျ ရောကျနတေယျ ´´ တံခါးဖှငျ့ပီး အခနျးထဲကို ဝငျလာသောမဇာက ကောငျမစုတျ ဘာလာလုပျတာလဲ ညညျးမောငျ ကို စိတျမခလြို့လား ´´ ဒါပေါ့ဟ တျောကွာ ညညျး ငါ့မောငျ ကို ဝါးစား လိုကျရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ ဟိဟိ ´´ စောကျပိုတှေ လုပျမနနေဲ့ မိစု ညညျးအကွောငျး ငါ အသိဆုံးပဲ မှနျးစမျး ´´ ဆိုပီး မဇာက မစုရဲ့ ထမိနျစကပျ အကှဲကွောငျးထဲ လကျထိုးထညျ့ကာ စမျးလိုကျတယျ ဟှနျးးးး ကောငျမ ထငျတဲ့ အတိုငျးပဲ တျောတျော ရှနပေီမလား ´´ အောငျမ ညညျးကတြော့ မရှ တာကနြတောပဲ နျော ဟှနျးးးး´´ မစုကလညျး မဇာ ရဲ့ ထမိနျပျေါ မှ စောကျဖုတျနရော ကို လှမျးကိုငျရငျး ကုတငျပျေါ မှာ လုံးထှေး ကသြှားတယျ ထို့နောကျ နှဈယောကျသား ကုတငျပျေါမှာ လုံးထှေးပီး တဈယောကျစကျပတျ တဈယောကျနှိုကျနကွေတာ ထမိနျတှကေ ဒူး အထကျကိုလနျကုနျကွတယျ ။ခွသေလုံးသားဖှေး ဖှေး ဥဥ နှငျ့ ကွညျ့ကောငျးသဖွငျ့ ကြှနျနျောလညျး ဘေးက ထိုငျကွညျ့နလေိုကျတယျ ။ ကုတငျပျေါမှာ လုံးထှေးနကွေတာ ဗှတျအိုငျ ထဲ ငါးရံ နှဈကောငျ တှနျ့တှနျ့ လူးနကွေသလိုပဲ ။ အသကျ သုံးဆယျကြျော အိမျထောငျသညျ နှဈယောကျ ကုတငျပျေါမှာ တှနျ့တှနျ့ လူး အောငျ တဈယောကျ အဖုတျ တဈယောကျနှိုကျနကွေတာ ကွညျ့ပီး ကြှနျနေျာ့ လီးက လဲ ထောငျမတျလာတယျ ။ ကြှနျနျောလညျး ထိုငျနရောမှ ထကာ အဝတျတှေ အကုနျခြှတျပဈရငျး ကုတငျပျေါ သို့ လှမျးလာလိုကျတယျ နှဈယောကျသားက တဈယောကျနုတျခမျး တဈယောကျ ကဈဆငျ ဆှဲနကွေပီ ကြှနျနေျာ့ လကျနှဈဘကျက သူမတို့ရဲ့ တငျပါးတှေ ကို ထမိနျ ပျေါ မှ လှမျးကိုငျလိုကျတော့မှ နှဈ ယောကျသား ကြှနျနေျာ့ ကို ခေါငျးထောငျကွညျ့ကွတယျ ပီးတော့ အဝတျဗလာ နဲ့ ကြှနျနေျာ့ ကို သဘောကစြှာ ရီရငျး ထထိုငျကွ တယျ ကဲ ကောငျမ တူးဝမျး ဆှဲကွစို့´´
ကဲ မောငျလေး ပကျလကျလှနျ အိပျထားလိုကျ ´´ ကြှနျတျော ပကျလကျလှနျ ကာ အိပျခလြိုကျတယျ သူမတို့ နှဈယောကျ ကုတငျပျေါ မှာပဲ မတျတပျ ရပျရငျး တဈယောကျ အကြီတှေ တဈယောကျ ခြှတျလိုကျပွီး အဝတျဗလာ ကိုယျစီ ဖွငျ့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မတျတပျ ရပျရငျး ကဈဆငျ ဆှဲနကွေသေးတယျ သူတို့ နှဈယောကျမှာ ပေါငျတံတှကေ အတူတူ လောကျရှိပမေယျ့ တငျပါးကတြော့ မစုက ပိုကားတယျ ။ မစုရော မဇာ ရော ဘျောဒီတှေ က လှတုနျးပတုနျး။ ကြှနျနျောလညျး ပကျလကျလှနျ ကာ ဂှငျးထုရငျး မစု နဲ့ မဇာ ရဲ့ အလှအပတှေ ကိုငေးကွညျ့ရငျးကြှနျနေျာ့ ရဲ့ ကံကောငျးမှုတှကေို တှေးကာ ပီတိ ဖွဈနမေိတယျ ။ မစုနဲ့မဇာ တဈယောကျ တငျပါး တဈယောကျပှတျရငျး ကဈဆငျဆှဲနကွေတာ နို့သီးတှကေ လညျး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျပူးကပျနတေော့တယျ ။ မမတို့ ဒီမှာ တဈယောကျတညျး ဖွဈနပေီနျော ´´
ဟိဟိ … လာပီ ´´ ဆိုပီး ကြှနျနေျာ့ ပေါငျ ဘေးတဘကျတခကျြစီမှာ ဝငျထိုငျတယျ ပထမဆုံး ကြှနျနေျာ့ လီး ကို လာကိုငျတာက မစု မ ဇာကတော့ ကြှနျနေျာ့ ရငျဘတျတှကေို သူ့လကျဖဝါးလေး နဲ့ ပှတျသပျနတေယျ ထို့နောကျ မဇာက ကြှနျနေျာ့ လီးကို နုတျခမျး ဖူးဖူး ဖွငျ့ ဒဈကို ပှတျသပျပေးတော့တယျ အဲ့ဒီ အခြိနျမှာပဲ မဇာက ကြှနျနေျာ့ ကိုယျပျေါ တကျခှပီး ကြှနျနေျာ့ နုတျခမျးတှကေို ဆှဲစုပျတော့ တာပဲ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ´´ မဇာ နို့သီးတှကေ ကြှနျနေျာ့ ရငျဘကျမှာ ကပျနတေယျ ကြှနျတော့လကျတှကေလဲ ကြှနျနေျာ့ ပျေါ တငျခှ ထားတဲ့ မဇာ ရဲ့ တငျပါးတှေ ကို ပှတျ သပျရငျး ဖငျနှဈခွမျးကွားထဲကို လှမျးလိုကျတယျ အပျေါကနေ လှမျး ကိုငျတာမို့ စောကျဖုတျ ကို ထိထိ မိမိ မကိုငျနိုငျ လကျလှမျးမမှီ ဖွဈနတေယျ ။ အဲ့ဒီ အခြိနျမှာ မစုက ကြှနျနေျာ့လီး ကို စုပျနရောမှ ရပျလိုကျပီး ကြှနျနေျာ့ လကျခြောငျး ကို လှမျးယူက သူမ ပါးစပျ ထဲ ထညျ့ကာ စုပျလိုကျပီး တံတှေးတှေ စှတျပေးတယျ ပီးတော့ ကြှနျနေျာ့လကျကို မဇာ ရဲ့ စအို ၀ ပျေါ တငျပေးလိုကျတယျ ။ ကြှနျနျောလဲ မဇာ ရဲ့ ဖငျဝ လေး ကို ပှတျလိုကျတော့ မဇာက ကြှနျနေျာ့ နုတျခမျးတှေ ကိုစုပျရငျး ခေါငျးငွိမျ့ပွတယျ … ဆကျလုပျ နှိုကျလို့ ရတယျ ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ ကြှနျနေျာ့လကျခလယျ တဈဆဈ လောကျ ဖငျဝ ထဲ ထိုးသှငျး လိုကျတယျ .
အငျ့…အုးးး´´ ကြှနျနေျာ့ လကျက မဇာ ရဲ့ ဖငျဝ ထဲ ဝငျလိုကျထှကျလိုကျ နဲ့ ကစားပေးနတေယျ မဇာ အနမျးတှကေလညျး ကွမျးလာ သလို အသကျရှူသံတှကေလညျး တအား ပွငျးလာတယျ အောကျက စုပျပေးနတေဲ့ မစုရဲ့ စုပျခကျြတှကေလညျး တဖွညျးဖွညျး မွနျ မွနျလာတယျ တခကျြတခကျြ မစုက ကြှနျနေျာ့ လီးကို ပါးစပျထဲမှ ခြှတျပီး မဇာ ရဲ့ အဖုတျ အကှဲ ကွောငျး နဲ့ ပှတျပှတျပေးလိုကျ ပွနျ စုပျလိုကျလုပျနတေယျ ။ မိစု ငါ့ စကျပတျထဲ လီးထိုးထညျ့ပေးစမျးပါ ငါ့ဖငျဝ ကို နငျယကျပေး ´´ “အငျးးး အငျးးး´´ မစုက ပါးစပျ ထဲမှ လီးကွီး ကို ဆှဲထုတျလိုကျကာ မဇာ အဖုတျထဲ ကို ထိုးသှငျးပေးလိုကျတယျ ။။။ဟားးးးမဇာ အဖုတျက တျောတျော ရှဲနတောပဲ ခြောခြောခြူခြူ ဝငျသှားတယျ မဇာက အပျေါက နေ စောငျ့စောငျ့ပီး သှငျးပေးသလို ကြှနျနျော ကလညျး အောကျကနေ ပငျ့ပငျ့ ပီး ထိုးပေးလိုကျတယျ
ကျွန်နော့် မရီး နာမည်က မစု နာမည် အရှည်တော့ မပြောတော့ဘူးဗျာ ကျွန်နော် က ကျွန်နော့် အကို အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်ရင်းနေ တယ် ကျွန်နော် နဲ့ မစု ဖြစ်ပျက်တာလေး တချို့ ပြောချင်လို့ပါ ။ နာမည်အရင်းတွေ အလုပ်အကိုင်တွေ တော့ အကုန်မပြောတော့ဘူး ဗျာ ။ ကျွန်နော့် နာမည် ကို ဖိုးဇော်လို့ ပဲ မှတ်ထားလိုက်တော့ ။ကျွန်နော့် အကို အလုပ် နဲ့ နယ်ဆင်းသွားပီး တစ်ပတ်လောက် အကြာ ပေါ့ ။ မနက်ပိုင်း ကျွန်နော့် တူလေး ကို မူကြိုလိုက်ပို့ပီး အပြန် မစုက သူ့ကို ဈေးလိုက်ပို့ဦးဆိုပီးပြောတာ နဲ့ ဈေးလိုက်ပို့ဖြစ်တယ် ။ အဲ့နေ့က မစု က ထမိန်စကပ် အနက်ရောင် အကြပ်နဲ့ အပေါ်က လဲ တီရှပ် အစိမ်းနု အကြပ်လေး ဝတ်ထားတာ ။
ကျွန်နော် နဲ့ အတူတူ ဆိုင်ကယ် နဲ့ ဈေးသွားတာပေါ့။ဈေး ရောက်ဘို့က ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် မောင်းရတယ်။မစုက ဈေးခြင်းတောင်းကိုလက်တဘက်နဲ့ ကိုင်ပီး နောက်လက်တဘက်က ကျွန်နော့် ခါးကို ဖက်ထားတယ် ။ အရင်က လဲ ဈေးလိုက်ပို့ဖူး ပေမယ့် အခုလို ခါးတော့ မဖက်ဖူးဘူး ပုံခုံးကိုပဲ ကိုင်ထားတာ များတယ်။ ဆိုင်ကယ်က ဖင်ထောင် ဘီး ဆိုတော့ ရှေ့ကို တိုးတိုးလာ ရင်း သူ့ နို့သီးကြီး နဲ့ ကျွန်နော့် ကျော ကို လာလာ ဖိ နေသလို ဖြစ်နေတာ ။ စိတ်ထဲ ယားကျိကျိ နဲ့ဗျ ။ အံကြိတ်ပီးမောင်းခဲ့ရတယ် ။ တော်ကြာ ဆိုင်ကယ် မှောက်နေမှ ဒုက္ခ ။ ဒီလိုနဲ့ ဈေးရောက်တော့ ကျွန်နော်က ဆိုင်ကယ်ရပ်တဲ့နေရာမှာ စောင့်နေခဲ့တယ် ။ မစုက ကျွန်နော့် ရှေ့က နေထွက်သွားတော့ အမှတ်မထင် ကြည့်မိလိုက်တာ ထမိန်စကပ်ကြပ်ကြပ် ဝတ်ထားတဲ့ ကျွန်နော့် မရီး တင်ပါးကြီး တွေက ကားထွက်နေတာပဲဗျာ ။ ထမိန်စကပ် တောင် ကွဲ ထွက်သွားမလား စိုးရိမ်ရတယ် ။ ကျွန်နော်လဲ မစု ဈေး အတွင်းထဲ ဝင် သွားတဲ့ အထိ သူ့တင်ပါး ကြီးတွေ နိမ့်တုံမြင့်တုံ နဲ့လျောက်သွားတာကို ငေးကြည့်မိနေတယ်။ ကလေး တစ်ယောက် အမေ မရီး ကို စိတ်ထဲက နေ ပြစ်မှား မိနေရင်း ဆိုင်ကယ်စတန်း မှာ ထိုင်စောင့်နေမိတယ် ။ တစ်နာရီလောက်ကြာတော့ ပြန်ထွက်လာတယ် ။
ကျွန်နော့် ဆီကိုလှမ်းလာတဲ့ခြေလှမ်းတွေ ခြေတစ်လှမ်း လှမ်းလိုက်တိုင်း ခြေသလုံးသား က ဒူးနား အထိ ဖွေးကနဲ ဖွေးကနဲ ။ အ နား ရောက်တော့ မရီး က ဘာကြည့်နေတာလဲ သွားမယ် ဆိုမှ သတိဝင်လာပီး စတတ် ပါတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို အယောင်ယောင် အမှားမှား ကစ် နင်းပီး နှိုးလိုက်တယ် ။ အပြန်လမ်း တလျောက်လုံးလဲ အလာတုန်းကလိုပဲ သူ့ နို့သီးကြီးတွေ နဲ ဖိဖိ နေတာ စိတ်ကို ထိန်းနေရ တယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဘာစားချင်လဲတဲ့ မေးတယ် ။ အဆင်ပြေတာ ချက်ပါ လို့ ပြောပီး ကျွန်နော်လဲ အိမ်ထဲ ဝင်လာလိုက် တယ် ။ အိမ်မှာက မရီး နဲ့ ကျွန်နော် ၂ ယောက်တည်း ။ အဝတ်အစားလဲပီး လက်ဘက်ရည်ဆိုင်သွားမယ် လို့စဉ်းစားပီးမှ မသွားချင် တော့တာ နဲ့ အခန်းထဲ အောင်းပီး အင်တာနက်ထိုင်ကြည့်နေလိုက်တယ် ။ တစ်နာရီလောက်နေတော့ မရီးက ကျွန်နော့် အခန်း ၀ လာ ရပ်ပီး ဆာရင် စားလို့ရပီဆိုပီးလာပြောတယ် ။ ခုနက ဈေးသွားတုန်းက ဝတ်စုံ မလဲ ထားသေးဘူး။ အကျီ မလဲ သေးဘူးလား မစု ဘာလို့လဲ ဘာမှ ဖြစ်ပါဘူး ဒီဝတ်စုံနဲ့ ကြည့်ရတာ တမျိုး ကြီး မို့လို့ အံမယ် .. ငါက ဘာဖြစ်နေလို့လဲ ကြည့်မကောင်းလို့လား တ အားကြည့်ကောင်းလွန်းနေလို့ အမ ရေးးးး
ငါ့မောင်က ရွဲ့တာလားဆိုပီး ကျွန်နော့် အခန်းထဲကို ဝင်လာတယ် အခန်းက ကျဉ်းကျဉ်း ရယ် ပီးတော့ ကျွန်နော့် ကုတင်ပေါ် ဝင်ထိုင်ပီး ဒီဝတ်စုံ နဲ့ ကြည့်ရ ဆိုးနေလို့လား မဟုတ်ပါဘူး ..ဒီဝတ်စုံ နဲ့ တကယ်လိုက်ပါတယ် လှလည်း လှပါတယ် ..အခုက အကိုကြီးမရှိတဲ့ အချိန် ဆိုတော့ …. နင့်အကိုကြီး မရှိတာ နဲ့ပဲ ငါက ခုလို မဝတ်ရတော့ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူး အမ ဝတ်ချင်ဝတ်ပါ ကျွန်နော့် အတွက် အဆင်မပြေလို့ ပြောမိတာပါ ဘာကို အဆင်မပြေဖြစ်နေတာတုန်း ဖိုးဇော်ရဲ့ ကျွန်နော် က မစု ရဲ့ မတ်လေ အခုလို ဝတ်ထားတော့ မစု အလှတွေ တအား ပေါ်လွင်နေတော့ တော်ကြာ မကောင်းပါဘူး မစုရယ် ဘာလဲ ခုနက ဈေးမှာ အမ ကို ခိုးကြည့်ပီး စိတ်ထဲ မဟုတ်တာတွေ တွေးနေမိနေတာ မလား ကျွန်နော် ဝန်ခံပါတယ် မစုက လှတာ ကိုးး ကဲပါ ငါ့မောင်ရယ် ကြည့်ချင်လဲ ခိုးမကြည့်ပါနဲ့ .. ဒဲ့ကြည့်ပါ ..ဟုတ်ပီလား လှလိုကြည့်တာပဲ မစု ပိုတောင်ကျေနပ်သေး ဘယ်လိုလဲ အမ က လှသေးရဲ့လား
ဆိုပီး ကုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်နေရာ ကနေ ထပီး ကိုယ်ကိုလှည့် ပြလိုက်တယ်။ မစု ကိုယ်လုံးက မင်းသမီး ခွန်းဆင့်နေခြည်လို ပုံမျိုး ။ တစ်ခဲနေတယ် ။ ကြည့်နေရင်း မနေနိုင်တော့ အိမ်မှာ ကလဲ ဘယ်သူမှ မရှိ ။ ကျွန်နော် စိတ်ရိုင်းဝင်ပီး မစု ကို ဖက်ပစ်လိုက်တယ် ။ ပီးတော့ နုတ်ခမ်းတွေ ကို အငမ်း မရ နမ်းပစ်လိုက်တယ် ။ခနနေတော့ မစုက ကိုယ်ချင်းခွာပီး နင့် အကို ကို မကြောက်ဘူးလား တဲ့ ကျွန်နော်က မကြောက်ဘူး ဆိုတော့ မစုကလဲ ဒါဆိုငါလဲမကြောက်ဘူးလာလိုက်ခဲ့ ဆိုပီး အိမ်ရှေ့ကိုထွက်သွားတယ် ပီးတော့ အိမ် ရှေ့ တခါး ကို ပိတ်လိုက်ပီး သူ့ အခန်းထဲ ဝင်သွားတယ် ။ ကျွန်နော် လည်း မထူးတော့ဘူးဆိုပီး ပုဆိုး တိုတိုပြင်ဝတ်ပီး မစု အခန်းထဲ ကိုလိုက်သွားတယ် ။ အခန်းထဲရောက်တော့ မစုက သူ့ ဆံပင်တွေကို စုပီး သရေပင်နဲ့ နောက်မှာ တွယ်လိုက်တယ် ။နဖူးပြင်လှလှ ရင်ဘက်ကြီးကြီး တင်ပါးကားကား နှင့် မစု ။ မင်းကြီးကြိုက် ဆိုတဲ့ပုံမျိုး ။ ကျွန်နော် မစုကို ဖက်ပီး နုတ်ခမ်းတွေကို နမ်း လက် တဘက်ကလဲ ထမိန်စကပ်ပေါ် က တင်ပါး တင်းတင်းတွေ ကို ပွတ်ဆွဲ မိနေတယ်။ မစု က လည်း နမ်းနေရင်း နဲ့ ကျွန်နော့် ပေါင်ဂွ ကြားထဲလက်ထိုးထဲ့ပီး ကျွန်နော့် ငပဲကို လက်နဲ့ ပွတ်ဆွဲတော့တယ် ။ ကျွန်နော့်လက်ချောင်းတွေက မရောက်မှန်းသိရက်နဲ့ ထမိန်စ ကပ် ပေါ်ကနေ ဖင်အကွဲ ကြောင်း ကိုလိုက်ပွတ်စမ်းနေမိတယ် ။ သူ့ နို့သီးတွေက ကျွန်နော့် ရင်ဘက် မှာ ဖိညှပ်နေတယ်
တင်းကြပ်နေတဲ့ ထမိန်စကပ် ပေါ်က နေ ဖင်အကွဲ ကြောင်းထဲ ထိ ထိထိမိမိ စမ်းမရဘူး။ တင်ပါး နှစ်ခုက တင်းရင်းပီး ကားထွက်နေ တာ ပျော့စိစိမဟုတ်ပဲ တောင့်တောင့်တင်းတင်း ရှိလှတယ် ။ ကျွန်နော် တို့ နှစ်ယောက် အနမ်းတွေ က ကြမ်းလာသလို မရီး မစု ရဲ့ လက်ကလဲ ကျွန်နော့် လီး ပေါ်မှာ မြန်သထက်မြန်လာပီး ပွတ်တိုက်ဆွဲ စောင့် နေတယ်။ကျွန်နော့် လက်နှစ်ဘက်က လဲ တင်ပါး နှစ် ခြမ်းပေါ်တင်ပီး ဖျစ်ညှစ်နေမိတယ် ။ ရင်ခုန်သံတွေ လည်း တအား မြန်လာတယ်။ ခနနေတော့ မစုက နုတ်ခမ်းချင်း ခွာလိုက်ပီး ကျွန် နော့် ကို စိုက်ကြည့်တယ် ပီးတော့ ကျွန်နော့် ပုဆိုး ခါးပုံစ ကို ဆွဲချွတ်ချလိုက် တော့ အောက်မှာ ကွင်းလုံးပုံကျသွားတယ် ။ ကျွန်နော် က အပေါ်ပိုင်း စွပ်ကျယ် လေး တစ်ခု ဖြင့် အောက်ပိုင်း ဗလာ ဖြစ်သွားတယ် ။ ကျွန်နော့် ကို မစုက တစ်ချက် ပြုံးရင်း ကြည့်တယ် နောက်တော့ ကျွန်နော့် ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ထိုင်ချ လိုက်ပါလေရော ။ အဲ့ဒီမှာ တင် ကျွန်နော့် လီး နဲ့ မစု မျက်နှာနဲ့က တတန်းတည်း ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်နော့် အတွေ့ အကြုံ အရ မစု ကျွန်နော့် လီး ကို လွေတော့ မယ်ဆိုတာ တပ်အပ် သိလိုက်တယ်။ နောက်ကို စုစည်းထားတဲ့ မစုရဲ့ ဆံပင်တွေ ကို ကိုင်လိုက်တယ် ။ မစုက ကျွန်နော့် လီးဒစ် ကို အသာ ဆွဲ လိုက်ပီး လျှာဖျားလေး နဲ့ တို့ ထိလိုက် တယ် ပီးတော့ ကျွန်နော့် ကို တစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်သေးတယ် ။ အသဲထဲ အေးခနဲ ဖြစ်သွားတယ် ။ ပီးတာနဲ့ ကျွန်နော့်ဒစ်ဖျား ကို လျှာ နဲ့ ပါတ် ပီး လွေတော့တယ် ။ ကလေးတစ်ယောက် အမေ ကျွန်နော့် မရီး တော်တော် ပညာ စုံပုံ ရတယ် ။ ကျွန်နော် ကို လွေနေ တာ များ အင်္ဂလိပ်ကားထဲကာ ဆော်တွေ လွေသလိုမျိုး ။လီးကို ကိုင်ကိုင် ညှစ်ပီး နုတ်ခမ်းကို ဖိ ပီး လွေတယ် ။ ကျွန်နော် လည်း မရီး မစု ခေါင်းကို ကိုင်ပီး စောက်ဖုတ်လိုးသလို တွန်းတွန်း ထည့်ပီး လုပ်နေမိတယ်။ လီး ကို အဆုံးထိ ငုံပီး အထဲ မှာ လျှာ ကို ကစား တာများဗျာ .. ကောင်းလွန်းလို့ ပြောမပြေတတ်အောင်ပါပဲ။
ငါးမိနစ်လောက် ကျွန်နော့်လီး ကို လွေ ပီး မစု က မတ်တပ်ရပ်ပီး ကုတင် နောက်က ဘောင်မှာ လက်ထောက်ပီး တင်ပါးကြီး ကို ကျွန်နော့် ဘက်လှည့်ပီး ပစ်ပေးလိုက်တယ် ။ မစု တင်ပါးကြီးကို ကျွန်နော် လက်နဲ့ အသာ တစ်ချက်ပွတ်လိုက်ပီး ထမိန်စကပ် ချိန် ကို ဖြုတ်ကာ အောက်ကို ဆွဲ ချွတ်ချလိုက်တယ် ။ အတွင်းခံ ဆပ်စမိုင်နာ အပြာရင့်ရင့် အတွင်းမှ ထိုးထောက်မတက် စွံကားထွက် နေတဲ့ တင်ပါးကြီး နှစ်ခြမ်း ။ ကိုက်ခဲပစ်ချင်စရာ။ တင်ပါးကြီးကိုလှုပ်ပြလိုက်သေးတယ် ။ ကျွန်တော် မနေနိုင်တော့ ။ အောက်ခံ ဘောင်းဘီ ကို ဆွဲ ချွတ်ပစ်လိုက်ပီး တင်ပါးကြီးတွေကို ဖျစ်ညှစ်ကာ ဒူးထောက်လိုက်တယ် ။ မစု ရဲ့ တင်ပါး နှစ်ခြမ်း ကို ဖြဲပစ်လိုက် ပီး ပွင့်အာ ထွက်လာတဲ့ အဖုတ် နှစ်ခြမ်း အရည်ရွဲရွဲ ဖြင့် ။ ကျွန်နော့် လျှာ ကို ထုတ် ဂျာပစ်လိုက်တယ် ။ တင်ပါး နှစ်ခြမ်းက ကြီးပီး တင်းနေတော့ အဖုတ်ဆီ ကို လျှာ က သေချာ မရောက်။ လျှာကို အတင်းလှမ်းထိုးတော့ မစု စအိုဝ ကို ကျွန်နော့် နှာခေါင်းက ဖိမိလျှ က်သား။ ကျွန်နော် မျက်နှာ တစ်ခုလုံး မစု တင်ပါး နှစ်ခြမ်းထဲ ရောက်နေသလို ဖြစ်နေတယ် ။ ကျွန်နော် လီးက တအားတောင်နေပီ ။ ကျွန်နော် မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပီး မစုရဲ့ တင်ပါးကို ကိုင်ကာ အဖုတ်ထဲ လီးကြီး ထိုးထည့်လိုက်တယ် ။ အရည်တွေ ရွဲ နေတဲ့ အဖုတ် ထဲ သို့ ချောချောချူချူ ဝင်သွားတယ်။
ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် အားး အ အားးး ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် အား…ရှီးးးးးးးးး အားးး မောင်လေး အားးး ဖိုးဇော် အားးးးးး ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် မစုက ကုတင်ဘောင်ကို ကိုင်က ဖင်ကြီး ကို နောက် ဘက် ပစ်ပီး ကျွန်နော်က နောက်မှာ မတ်တပ်ရပ်လျှက် လိုးနေတယ်။ တချက်တချက် မစု ရဲ့ နောက်ပြန် စောင့်ချက် များ က ပြင်းလွန်းတော့ ကျွန်နော် နောက်ပြန်ယိုင်လဲ မလို ဖြစ်လို့ မစု ခါး ကို ကိုင်ထားရတယ် ။ ကုတင် ဘောင်ကို ကိုင်ပီး အားရပါးရ ခံနေသော မစု နဲ့ နောက်မှ အပီ အပြင် လိုးခွဲ နေတာ ကြောင့် ကျွန်း ကုတင်ကြီး မှာ တကျီကျီ ဖြင့် မြည့်သံတွေ ထွက် ကျွန်နော် ဘိုက်သားဆီးခုံ နဲ့ မစုတင်ပါးကြီး ရိုက်ခတ်သံ တဖတ်ဖတ်မြည်သံများ လီးနဲ့စက်ပတ် အတွင်းမှာ တဘွတ်ဘွတ် မြည်သံများ ဖြင့် အခန်းထဲ အသံမျိုးစုံ မြည်ထွက်နေတယ်။ မနက်ဘက်မို့တော်သေး ည ဘက်တိတ်ဆိတ်နေချိန်သာဆိုလျှင် အသံများ အား ဘေးအိမ်များ မှ ကြားသွားနိုင်သည်။ လိုးနေရင်းမှ ပဲ မစု ရဲ့ အပေါ် တီချပ် ကို လှမ်းချွတ်လိုက်တယ် အောက်ခံ ဘရာဇီယာ အပြာရင့်ရင့် ပေါ် လာပီး ဘရာဇီယာ ပေါ်မှ ပဲ နို့တွေကိုလှမ်းကိုင်ပီး နောက်မှ စောင့် စောင့်လိုးပေးနေခဲ့တယ် ။
အားးး မောင်လေး ဖိုးဇော် အားးးရှီးးးး ကောင်းလိုက်တာ ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် စောင့်စောင့်လိုးလိုက်တိုင်း အဖုတ် ဖောင်းဖောင်းကြီးဟာ အတွင်းထဲကို ကျွံကျွံ ဝင်သွားပီး လီး ပြန်ထုတ်လိုက်တိုင်း အဖုတ်နုတ်ခမ်းသားများဟာ လီး နဲ့ အတူ ကပ် ကပ်ပါလာတယ် ။ မစု အဖုတ်က အရည်တွေ ကြောင့် လီးက ချောချောချူချူ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် နဲ့ အရမ်းကောင်းနေတယ် ။ မစု က သူ့တင်ပါးကြီးတွေကို အနောက်ဘက်ကို အတင်းကော့ပစ်ပေးထားတယ် ။ တင်ကြီးကြီးဆော်တွေကို ကုတင်ဇောင်းမှာ ထောက် ပီး လိုးရတဲ့ အရသာ ဘယ်လို လဲ ဆိုတာ ပြောမပြတတ်အောင်ပါပဲဗျာ။ ခနနေတော့ မစုက ခန္ဒာကိုယ်ကို မတ်မတ်ရပ်လိုက်တော့ စောက်ဖုတ်ထဲက ကျွန်နော့် လီးကြီး က အပြင်ကို ဘွတ်ကနဲ ထွက်လာတယ် ။ မစုက ကျွန်နော့် ကို ကျောပေးပီး ကုတင်ပေါ်ကို တက်လိုက်တယ် ။ပီးတော့ ကျွန်နော့်ကို လှည့်ကြည့်ပီး လက်ညိုးလေး ထောင်က ကွေးဆန့်လုပ်ပီး ကျွန်နော့် ကို ဖိတ်ခေါ်တယ် ။ ပီး တော့ သူ့ရဲ့ ဘရာစီယာ ကို လက်နောက်ပြန်လုပ်ပီး ချိတ်တွေ ဖြုတ်ချလိုက်တယ် … အားးးး မိုက်လိုက်တဲ့ နောကြီးတွေ လုံးခဲနေတာ ပဲ ဗျာ ။ ကျွန်တော် လည်း ကုတင်ပေါ်တက်ပီး လက်တဘက်က သူ့ ခေါင်းကိုကိုင်ပီး အသာမော့ကာ နုတ်ခမ်းကို စွဲစုပ်ရင်း လက် တဘက်က နို့သီးကြီးကို ဖျစ်ညှစ်ကိုင်စုပ်နေပေးလိုက်တယ် ။ မစုကော ကျွန်နော် ကော ကုတင်ပေါ်မှာ ဒူးထောက်လျှက် ပဲ ။ မစု လက်တဘက်က လည်း ကျွန်နော့် လီးတံကြီး ကို ကိုင်ကာ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် ပွတ်စွဲပေးနေတယ် ။ ခနနေတော့ မစုက နမ်းနေတာ ကို ရပ်လိုက်ပီး ကျွန်နော့် လီး ကြီး ကိုကြည့်တယ် ။ပီးတော့ လီးပေါ်ကို တံတွေး ပျစ်ကနဲ့ ထွေးချလိုက်ပီး လီးကြီးကို ဂွင်းထုပေးနေ တော့တယ်။ ကျွန်နော့် လီးကြီးပေါ်မှာ မစု တံတွေးတွေ ကော စောက်ဖုတ်ရည်တွေ ကော ဖြင့် စီးတွဲပြောင်လက်နေတယ် ။ မစု တံတွေး တွေက လီးတံကနေတဆင့် ဂွေဥ တွေ ဆီပါ စီးကျလာတယ်
မစု ပတ်လက်လှန်လိုက်နော် အင်းးး မစု ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန် ပေါ်ကားပေးထားတယ် ကျွန်တော်လဲ မစုရဲ့ ပေါင်ကြားထဲ ကို ကိုယ်လုံး ဝင်လိုက်ပီး စောက်ဖုတ်ပေါ်လီးတင်လိုက်တယ် ။ စောက်ဖုတ်မွှေးတွေက မထူမပါး ရိတ်ပီးကာစ ပြန်ထွက်လာပုံရ တယ် ။ ဒါနဲ့ ကျွန်နော်လဲ အဖုတ်ပေါ်မှလီး ကို လက်နဲ့ ကိုင်ပီး စောက်ဖုတ်ကို လေးငါးချက် တဘက်ဘက် ရိုက်လိုက်တယ် ။ စောက် ဖုတ်နဲ့လီးရိုက်သံကြောင့် ကျွန်နော့်လီး က ပိုတောင်လာသလို ထင်ရတယ် ။ မစုက သူ့စောက်ဖုတ် ဘေးနုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို လက်ညိုး နဲ့လက်ခလယ် လေးသုံးပီး အသာဖြဲလိုက်တော့ အစိပြူပြူ လေး ထွက်လာတယ် ။ ထွက်လာတဲ့ အစိပြုပြူလေး ကို ကျွန်နော် လီးဒစ် နဲ့ အသာ ပွတ်ဆွဲလိုက်တာ မစုထံမှ ညီးညူသံ ခပ်ပြင်းပြင်းထွက်လာတယ် ။ အားးးးမောင်…ဖိုးဇော် ကောင်းတယ် ကွယ် မောင်လေး အားးးး အငြးးးးအားးးး မောင်လေး ဖိုးဇော် ထည့်လိုက်တော့ကွာ ပြောလဲပြော ကျွန်နော့် လီးတံကြီး ကို လက်နဲ့ လာကိုင်ပီး အဖုတ်ဝ မှာ ဒစ်တေ့ပေးတော့တယ် ။ ကျွန်နော်လည်း မစုပေါင်နှစ်ချောင်း ကို အားပြုကိုင်ရင်း လီးကို စောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးသွင်းချလိုက်တယ်
အားးး ဝင်သွားပီ မောင်လေး အားးးကောင်းတယ်ကွယ် လိုးပါနော် အားးးး ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် အဖုတ်အတွင်းမှ လေအံသည့်အသံများ ဆီးခုံချည်း ရိုက်ခတ်သံများ ပြန်လည်ဆူညံလာတော့တယ် ။ အားးးမောင်ရယ် ကြိုက် တယ်ကွာ လိုးပါနော် စောင့်လိုးပေး ထိတယ်ကွာ ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ကြိုက်ရဲ့လား မစု ကြိုက်တယ်ကွာ မောင် ပက်လက်လှန်ပေးကွာ မ အပေါ်က တက်စောင့်ပေးမယ် အင်း လုပ်လေ..မ ကျွန်နော် ပက်လက်လှန်လိုက်တယ် ။ မစုက ကျွန်နော့် ပေါ် တက်ခွပီး အဖုတ်ကို တံတွေးစုတ်ပီး လီးတံကို အဖုတ်ဝ မှာ တေ့ကာ ထိုင်ချလိုက်တယ် ။။ အားးးးကောင်းတယ် မရယ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ကျွန်နော့် ရင်ဘက်ပေါ် လက်ထောက်က အပေါ်မှ အားရှိပါးရှိ တက်စောင့်တော့တယ် ။ ကျွန်နော် လည်း မစု တင်ပါးကြီး နှစ်ခြမ်းကို ကိုင်ကာ အောက်မှ ပင့်စောင့်ပေးလိုက်တယ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ကြီးမား တင်းရင်းနေတဲ့ ဖင်သားကြီးတွေကို ပွတ်ပေးနေရတာ အားရစရာ။ မစုက လည်း အပေါ်မှ အဆက်မပြတ် စောင့်ချပေးနေတယ် ။ ကျွန်တော့ လက်တဘက်က တင်ပါးကြီးတွေကို ပွတ်ရင်း တင်ပါး အကွဲကြောင်းမှ တဆင့် မစု ဖင်ဝ လေးအား လက်ခလယ်လေး ဖြင့် ပွတ်ပေးနေမိတယ် ။
ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် အားး ကောင်းလားမောင် ကြိုက်ရဲ့လား ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် အင်း..ကြိုက်တယ် မရယ် …မောင်ပီးတော့မယ်ထင်တယ် အားးးး အင်း မောင်ပီးချင်ပီးလိုက်လေ …အားးးသုတ်ရည်တွေ ထုတ်ပစ်လိုက်အားး မ စက် ပတ်ထဲ လီးရည်တွေ သွင်းလိုက်ပါ… ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် အချက် ၂၀ လောက် စောင့်ပေးပီး ကျွန်နော် မနေနိုင်တော့ မစု စောက်ပတ်ထဲ ကို အောက်ကနေပင့်ပီး လီးရည်တွေ ပန်းထုတ်မိတော့တယ် ။။ အားးးးကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ် …ချစ်သွားပီကွာ စက်ပတ် ကြီး ကို လီးအဆုံးထိ ဖိချရင်း ကျွန်နော့် လီးရည်တွေကို ခံယူကာ ကျွန်နော့်ပေါ်မစု ကိုယ်လုံးကြီး မှောက်လျှက်သားကျလာတော့တယ် ။။။။ အဲ့ဒီနေ့က ကျွန်နော် နဲ့ မစု နေ့လည် သုံးနာရီလောက်ထိ ငါးချီလောက် လိုးဖြစ်ကြတယ် ။ အိမ်ထောင်သည် မစု က ကျွန်နော့် ကို သူ့ရဲ့ အိမ်ထောင်သည် ဘ၀ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ ကို တကွက်ချင်း ပြပေးသွားတယ် ။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း ကလေးမူကြို ပို့ပီးချိန် ညဘက်ကလေး အိပ်ချိန်များမှာ မစုနဲ့ ကျွန်တော် ထင်တိုင်း ကျဲခဲ့ကြတယ် ။ မစု ကို ကျွန်နော့် အကိုရဲ့မယား ဆိုတာတောင် မေ့ချင်ချင် ဖြစ်သွားတယ် ။ ကျွန်နော့် အကို ကလည်း နယ်တခါဆင်းရင် သုံးလေးပါတ်ကြာတတ်တာ မို့ အေးအေးဆေးဆေး ကဲချင်တိုင်းကဲ နေမိတာ ပါပဲ။
( စကားချီး.. ဇာတ်လမ်း အသွားကောင်းအောင်လို့ ကျွန်တော့ အကိုကို နယ်ကို တစ်လလောက် အလုပ်သွားလုပ်ခိုင်းလိုက်တယ် နော် ) ညဘက်တွေဆို မစုက ကျွန်နော့် အခန်းမှာပဲ လာအိပ်တတ်တာ များတယ် ။ နေ့လည်ပိုင်းတွေ မှာ တော့ သိပ်မလုပ်ဖြစ်ဘူး ကျွန်နော် က အလုပ်သွားရတာ ဆိုတော့ ညဘက် ကလေး အိပ်ချိန် ကတော့ အချိန်မှန်လုပ်ဖြစ်တာ များတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ပတ် လောက်အကြာ စနေ့နေ့ အလုပ်ပိတ်ရက် မနက်ဆယ်နာရီလောက်ပေါ့ အိမ်ရှေ့ ကို ကားတစ်စီး ဆိုက်လာတယ် ။မောင်လေး ဖိုးဇော် ခြံတခါး ဖွင့်ပေးလိုက်ပါဦး မ သူငယ်ချင်း လာတာပါ ကျွန်နော် ခြံတခါးနားအရောက် Honda Fit အဖြူရောင်လေး အတွင်း မှ မစု အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကြွကြွရွရွ လေး ဆင်းလာတယ် ။ တစ်ယောက်တည်း ကားကို ကိုယ်တိုင် မောင်းလာတာ ။ ကျွန်တော်က ကားမောင်းရတာ ဝါသနာ ပါတာ မို့ ကားကို သေချာ စိုက်ကြည့်မိနေတုန်း တံခါးဖွင့်ပေးဦးလေ.. အထဲကို လူဝင်မှာ ကားဝင်မှာ မဟုတ်ဘူး သြော်…ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့အမ ကားလေးက လှလို့ ကြည့်နေမိတာ တံခါးဖွင့်မို့မေ့သွားတယ် သြော်..အော် ..ကားလေးက လှလို့ ဆိုတော့ လူက တော်တော် အရုပ်ဆိုးနေလို့ဖြစ်မယ် အဲ… အခုမှသေချာကြည့်မိတော့ လူက ကားထက်ပိုလှ တာပဲ …ဟီးးးး
သွား ၃၂ ချောင်းပေါ်အောင်ဖြီးပြရင်း ခြံတံခါး ဖွင့်ပေးလိုက်တော့ ကျွန်နော့် ဘေးကနေ အသာထွက်သွားပီး အိမ်ပေါ်တက်သွားတယ် ။ ရေမွှေးနံ့ ချိုအီသင်းသင်း လေး ဘေးမှာကျန်နေရစ်ခဲ့ပီး သူမရဲ့ နောက်ကို သေချာကြည့်မိလိုက်တယ် ။စကပ်ဒူးဖုံး နက်ပြာရောင်နှင့် အပေါ်အကျီ ဂျိုင်းပြတ်လေးဖြင့် လှပလွန်းနေတယ် ။ ဂျိုင်းပြတ် အကျီကြောင့် လက်မောင်းသားလေးများမှာ ဆင်ဆွယ်လေး များအလား အဖွေးသားပေါ်လွင်နေတယ်။ ဘယ်ဘက်ခြေကျင်းဝတ် အထက်မှာ ရွှေရောင် ခြေကျင်း လေး က ခြေသလုံး အဖွေးသားလေးများနဲ့ လိုက်ဖက်ညီလွန်းလှတယ်။ မစု ထက်တောင် ပြည့်တင်းလှတဲ့ တင်အစုံ နဲ့ လှုပ်လီလှုပ်လဲ လျောက်သွားတာ တံတွေးတောင် မျိုချမိတယ် ။ သြော် ..Honda Fit ကားလေးထက်တောင် တင်းတင်းရင်းရင်း ရှိလှပါလား ။ သူ့ နောက်ကျောဘက်ကိုကြည့်နေတာ ကို သိသယောင်ယောင် နောက်ကျောမှာ ချထားတဲ့ ဆံပင်လေးကို တောင် ခါရမ်းသွားလိုက် သေးတယ် ။ မျက်စိထဲမှာ ထက်ထက်မိုးဦး ရဲ့စံပယ်ပန်းရနံ့လေးသင်းကြူနေ ဆိုတဲ့ Beauty shampoo ကြော်ငြာလေးကိုတောင် ပြေးမြင်မိတယ်။ နောက်ကို တော့ ပြန်လှည့်မကြည့်.. ကျွန်နော် လည်း ခြံထဲမှာ ပဲ ကျန်ခဲ့ပီး သစ်ပင်လေး တွေ ရေလောင်း ဘို့ လုပ် နေလိုက်တယ် ။
ဟဲ့ စုစု နေကောင်းလား မတွေ့တာ ကြာလို့ လှလာတယ်နော် အံမယ် ညည်းက မှ ပိုလှလာတာပါနော် ဘယ်လိုလဲ စီးပွားရေးတွေ အဆင်ပြေနေတယ်ထင်ပါ့ ပြေပါတယ် မပြေတာက တစ်ခုတည်း ညည်းကို ဖုန်းထဲက ပြောထားတဲ့ အတိုင်းပေါ့ မပြေတာ တစ်ခုပဲ ရှိတယ် အခုတောင်ညည်း ဖုန်းဆက်လို့ လာခဲ့တာ အဆင်ပြေမယ်မလား ခုနက ငါ အိမ်ပေါ်တက်လာတော့ နောက်က လှမ်းကြည့် နေရဲ့လား ကြည့်နေတာမှ မျက်စိတောင် ကျွတ်ကျမတတ်ပဲ .. ဘယ်လိုလဲ ငါ့မတ်ကလေး လန်းရဲ့လား ငါပညာအစုံသင်ပေးထားပီး ပီ ညည်းဘို့ တော်ပါ ကောင်မ ညည်းဘို့ ညည်းဘို့ နဲ့ ကျောင်းတုန်းကလဲ ညည်းဘို့ညည်းဘို့ ဆိုပီး သူချည်း စားစားသွားတာ မသိပဲ နေမယ် မှတ်လို့လား မစု နဲ့ ဇာဇာ က ကျောင်းတုန်းထဲက သူငယ်ချင်းတွေ ပွေခဲ့ရှုပ်ခဲ့ကြတာလဲ အတူတူ .. ကျောင်းကတည်းက ဘဲ တစ်ပွေကို အတူတူ လိုက်ပီး နေခဲ့ဖူးကြတဲ့သူတွေ ပြောမနာ ဆိုမနာ ။ အခု ဇာဇာက ဘောစိ တစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ပီး တောင် ကြီးမှာ နေတယ် ။ ဘောစိက အသက်ကြီးကြီး ရှမ်း လူမျိုးတစ်ယောက် ။
အခု ဇာဇာ က မစုတို့ မြို့ကို တစ်ယောက်တည်း သီးသန့် လာလည်တာ ။ အဘိုးကြီးဆီ ခွင့်တိုင်ပီး သူငယ်ချင်းဆီ သွားလည်မယ် ပြောတုန်းက မစုဆီကို ပါ အဘိုးကြီးက ဖုန်းလှမ်းဆက်မေး ပီး တော့ မှ ခွင့်ပြုလိုက်တာ ။ ဒါတောင် ဒရိုက်ဘာ တစ်ယောက်ထည့်ပေးလိုက်တာ ဒီရောက်မှ ဒရိုက်ဘာ ကို ပြန်လွှတ်လိုက်တာ ။ လောလောဆယ်တော့ ဇာဇာ တစ်ယောက်တည်း ဟိုတယ်မှာ တည်းတယ် ။ ဒီကို လာရတဲ့ အကြောင်း အရင်းကတော့ မစုရဲ့ မတ် ကလေး ဖိုးဇော် အကြောင်း ကို မစုက ပြောပြလို့ ။ အစ ကတော့ မစု က သူဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလေး တွေ ရင်ဖွင့်ပြခဲ့တာ အဲ့ဒီမှာတင် ဇာဇာ က လည်း အဘိုးကြီးနဲ့ နေရတာ ပျင်းလာပီ လာလည်မယ် ပီးတော့ ဖိုးဇော် နဲ့လည်း ချိတ်ပေးဘို့ပြောတော့ မစုလည်း သဘောတူ လိုက်ပီး ဂွင်ဖန်ပေးတဲ့သဘော။ အတွင်းသိ အစင်းသိ သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်တာက တစ်ကြောင်း တခါတရံ မစု တို့ ငွေရေးကြေးရေး အခက်အခဲ ဆို လက်မတွန့်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ အတွက်က တစ်ကြောင်း ဇာဇာ က မတ် ကလေး နဲ့ ကိစ္စ စိတ်ဝင်စားကြောင်း သူလည်း စမ်းကြည့်ချင်သည်ဟု ဆိုလာသဖြင့် အခု လို ဂွင်ဖန်ပီး အိမ်သို့ အလည် ခေါ်လိုက် ခြင်းလည်း ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီ အကြောင်းတွေက ကျွန်နော် နောက်မှ သိခဲ့ရတာပါ ။ မစုပြောပြလို့။
မောင်လေး …ဖိုးဇော် ခန.. ဟုတ်ကဲ့ လာပီး မစု ကျွန်နော် အိမ်ပေါ်ရောက်တော့ သူတို့ နှစ်ယောက် ဧည့်ခန်းမှာ စကားထိုင်ပြောနေ တယ် လာ မောင်လေး ဖိုးဇော် ..ဒါ မစု ကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်း ဇာဇာ တဲ့ တောင်ကြီးမှာ နေတယ် အခု အလုပ်ကိစ္စ နဲ့ ရောက် နေတာ အိမ်ကိုလာလည်တာ.. ဒီအတောအတွင်း သူသွားချင်တဲ့ နေရာတွေ မောင်လေး လိုက်ပို့ပေးဘို့ အကူအညီတောင်းနေလို့ မောင်လေး အဆင်ပြေမလားလို့ ဟားးး အဆင်ပြေတာပေါ့ ကျွန်နော်လည်း ကားမောင်းချင်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ အော်.. ဖိုးဇော်က ကားမောင်းရတာ ဝါသနာ ပါတာလား ဟုတ်ကဲ့ မဇာဇာ ကျွန်နော် က ဆယ်တန်းဖြေပီးကတည်းက ကားမောင်းသင်ထားတာ ကားပိုင်မရှိတော့ မမောင်းဖြစ်ဘူး သူငယ်ချင်း ကားတွေတော့ လိုက်လိုက် မောင်းပေးတယ် ရပါတယ် အမ ကို မဇာ လို့ ပဲ ခေါ်ပါ ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ မဇာ ကဲ ဒါဆို အဝတ်အစားသွားလဲ ဒီမြို့က အထင်ကရနေရာတွေ အကုန်လိုက်ပို့ရမယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ ကဲ..အေးဆေးသွားကြ သူငယ်ချင်း ပြန်လာဖြစ်ရင် ဖုန်းဆက်လိုက် အိုခေ ကျွန်နော် နဲ့ မဇာ တို့ နှစ်ယောက်သား မြို့ ထဲ အထင်ကရ နေတွေ ဘုရားတွေ အကုန်လိုက်ပို့ နေ့လည်စာ ကို မြန်မာထမင်းဆိုင်မှာ ပဲ စားဖြစ်တယ် ။
လျောက်လည်ကြ စကားတွေပြောကြ ဖြင့် ကျွန်နော် နဲ့ မဇာ တော်တော်ရင်းနှီးလာတယ် ။ သူ့ အကြောင်း ကိုယ့် အကြောင်းတွေပြောကြပေါ့ ။ကျွန်နော့် အကြောင်း က သိပ်မပြောဖြစ် မဇာကတော့ သူက ချမ်းသာတဲ့ သူနဲ့ အိမ်က ပေးစားလို့ လက်ထပ်လိုက်ရကြောင်း သူ့ထက်အသက်၂၅ နှစ်ခန့် ကြီး တဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်လိုက်ရတဲ့ အတွက် အိမ်ထောင်ရေး အခက်အခဲတွေ ရှိကြောင်း သားသမီးလည်းမထွန်းကားခဲ့ကြောင်း စီးပွားရေး အဆင်ပြေနေပေမယ့် အေးစက်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ကို ဖြတ်သန်းနေရကြောင်း အရမ်းအထီးကျန်ဘို့ကောင်းကြောင်း တွေ ပြောပြတယ် ။ သူယောကျားက အခု အသက် ၅၈ ထဲရောက်ရှိနေပီး မဇာက ၃၃ နှစ်သာ ရှိသေးသည်။ ကျွန်နော်က အသက် ၂၇ ကျော်ဆိုတော့ မဇာနဲ့ ကျွန်နော် အသက် ငါးနှစ်ကျော်ကျော် လောက်သာကွာသည်။ကျွန်နော် နဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့ ဘုရားပေါ် အတက်လှေကားလေးများတွင် ကျွန်နော့် လက်မောင်း ကို မှီတွဲ လာတယ် ။ မဇာ ဆီမှ ရေမွှေးနံ ချိုအီအီ လေးက ကျွန် နော့် ရဲ့ စိတ်တွေ ကို ဆွဲဆောင်နေသလိုပဲ ။ဘုရားပေါ် လက်လျောက်တဲ့ အခါတောင် ကျွန်နော့်လက်ကို တွဲထားသေးတယ် ။ မဇာရဲ့ ဆံပင်မှ ရှန်ပူရနံသင်းသင်းလေးကလည်း လေတိုက်လို့ ဆံပင်လေးတွေ ကျွန်နော့်ဘက် ဝဲဝေ့လာတိုင်း ရှူရှိုက်မိတယ် ။
ညနေလေးနာရီလောက်ကျတော့ မဇာက ဟော်တယ်ပြန်ပီး ရေချိုး ခနနားပီး မှ မစု တို့ အိမ်ကို ပြန်ဘို့ ပြောလာတာနဲ့ မဇာတည်းတဲ့ ဟိုတယ်လ် ကို မောင်းလာခဲ့လိုက်တယ် ။ ဟိုတယ်လ်ရောက်တော့ မဇာ အခန်းထဲ လိုက်လာဘို့ ခေါ်တယ် ဟိုတယ်လ် က ကောင်လေး ကို လည်း မုန့်ဘိုး ပေးလိုက်တာ တွေ့တယ် ။ တကယ်ဆိုရင်တော့ ဧည့်သည်တွေက တည်းခိုသူတွေ အခန်းကို လိုက်လို့ မရ။ မဇာတည်းတဲ့ အခန်းက ဘန်ဂလို လုံးချင်း အခန်းလေး အထဲမှာ နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ကြီး နှစ်ခု တီဗီ ရေခဲသေတ္တာ အဲ့ကွန်း ရေချိုးခန်း ရေပူရေအေး အပြည့်အစုံ ဆက်တီတွေ စာရေးစာပွဲတွေပါ ပါတယ်သေးတယ် ။ ဒီလို အခန်းမျိုး အခု မှ ကျွန်နော် ရောက်ဖူးသည်။အခန်းထဲ ရောက်တော့ ဖိုးဇော် လှဲချင်လှဲလေ အမ ရေချိုးလိုက်ဦးမယ် ရတယ်မဇာ ကျွန်နော် ဆက်တီ မှာပဲ ထိုင် စောင့်တော့မယ် မဇာ က တယ်လီဖုန်း ကို နှိပ်ပီး စားသောက်စရာတွေ မှာတယ် ပီးတော့ ခုန က အဝတ်အစားအတိုင်း ပဲ ရေချိုးခန်း ထဲ ဝင်သွားတယ် ။ ကျွန်နော် တီဗီ ထိုင်းကြည့်ရင်း စောင့်နေတာ ခနနေတော့ အခန်းတံခါး ခေါက်သံ ကြားလို့ သွားဖွင့်လိုက်တော့ ဝိ တ်တာ ကောင်လေး တစ်ယောက် အစားအသောက် ဗန်းကြီး ကိုင်ပီး စားစရာတွေ လာပို့တာနဲ့ ယူထားပီး ဆက်တီပေါ်မှာ တင်ထား လိုက်တယ် ။
မောင်လေး ပျင်းနေပီလား ..´´ စကားသံနှင့် အတူ ရေချိုးခန်း အတွင်းမှ တဘက်အဖြူကြီးပတ် ကာ မဇာ လှမ်းထွက်လာတာတွေ့ လိုက်ရတယ် ။ ရပါတယ် မဇာ … မဇာ အရမ်းလှတာပဲ ´´ မဇာ ပေါင်တံ ဖွေး ဖွေး ကြီးတွေကို ကြည့်ရင်းပြောလိုက်တယ် ဟု တ်လားး တကယ်လား မြှောက်တာလား မမြှောက်လဲ မောင်လေး စားချင်တာ ကျွေးမှာပါနော် ´´ မဇာ စေတနာ ရှိတာ ကျွေး ကုန် အောင် စားပါ့မယ်´´ ကျွန်နော် မဇာနားကို တိုးကပ်သွားလိုက်တယ် ။ ရေချိုးခန်းက ထွက်ခါစ သင်းပျံ့ပျံ့ ဆပ်ပြာရနံတစ်ခု ရှူရှိက်မိ တယ် ။ စိတ်ထဲ လန်းဆန်းသွားသလိုပဲ ။ မဇာ မျက်နှာပေါ် ပုံခုံး ပေါ်တို့ မှာရေစက်ကလေး တွေနဲ့။ မဇာ ပုခုံးပေါ်ကို လက်တဘက် တင်လိုက်ပီး နောက်လက်တဘက်က တဘက်ပတ်ထားတဲ့ တင်ပါးပေါ် ကို တင်လိုက်တယ် ။ မဇာ က အလိုက်သင့် မျှောပါလာ တယ် ။ ကြည့်စမ်းပါဦး ချောချောလှလှ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး သူဌေးဇနီးလေး တစ်ယောက် ဟာ ကျွန်နော့် ရင်ခွင် ထဲ ရောက်နေပီလေ ။ ကျွန်တော် ဘယ်လောက် ကံကောင်းလိုက်သလဲ ။ မဇာ လည်ဂုတ်သားလေး ကို အသာငုံကာ နမ်းလိုက်တယ် ။
မောင်….´´ တိုးတိုးညှင်းညှင်း လေသံလေး တစ်ခု ကျွန်နော့် နားထဲ ဖြတ်ပြေးသွားတယ် ဟင်…မဇာ ဘယ်လို ခေါ်လိုက်တာလဲ ´´ နုတ်ခမ်းလေး လှုပ်ရုံ ပြုံးပြပီး မောင် …လို့ ခေါ်လိုက်တာလေ ´´ နားဝင် ချိုလိုက်တာ မ ရယ် ´´ ဒီနေ့ ည မောင် မ ကို အဖော် ပြု ပေးနော် ´´ မဇာရဲ့ နုတ်ခမ်းလေး ကို ဆွဲ စုပ်လိုက်ရင်း ရင်ဘက် ပေါ် မှာ ချည်နှောင်ထားတဲ့ တဘက်စလေး ကို ဖြေချလိုက်တယ် ။ မဇာ လည်း ကျွန်နော့် ခါး ကို တင်းကြပ်စွာ ဖက်လာရင်း ကျွန်နော့် ကို ခပ်ပြင်းပြင်း အနမ်း တွေ ပြန်လည် တုန့် ပြန်လာသလို မဇာ ပေါင်ဂွကြားက ကျွန်နော့် ပေါ် ကို တိုးဝင်လာပီး ပွတ်ဆွဲလာတယ်။ ကျွန်နော့် ဝတ်တွေ ကို အလျှင်အမြန် ပဲ ဆွဲ ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ ခုဆိုရင် ကျွန်နော် နဲ့ မဇာ ကိုယ်လုံးတီး ဖြင့် နှစ်ယောက်သား မတ်တပ်ရပ်လျှက် အနမ်းတွေ ကို ချိုမြိန်စွာ သောက်သုံးနေတယ်။ ဆယ်မိနစ်လောက် အနမ်းယာဉ်ကြောမှာ မျောခဲ့ပီး ကျွန်နော် မဇာ ကိုယ်လုံးလေး ကို ပွေ့လိုက်တာ ကုတင်ပေါ် အသာချလိုက်တယ် ။ ကုတင်ပေါ် မှာ ပက်လက်ကလေး လန်နေတဲ့ မဇာ နို့သီးတွေကိုချေရင်း ကုတင်အောက်နားမှာ ဒူးထောက်လိုက်ကာ နို့သီးတွေ ကို စွဲ စို့ပစ်လိုက်တယ် အားးးး မောင်ရယ် …´´
ကျွန်နော့် လက်တဘက်က မဇာ ရဲ့ အဖုတ်ပေါ် သို့ လှမ်းတင်လိုက်တယ် ။ အဖုတ်က ဖောင်းကားနေပီး ရေချိုးပီးကာစ ဖြစ်နေတာ တောင် နွေးအိနေတယ် ။ အဖုတ်ကြားလေး ထဲကို လက်ထိုးထဲလိုက်ချိန် လက်ခလယ်ဟာ ချောမွေ့စွာ ဝင်သွားတယ် အားးးး ´´ မဇာ ပေါင်တံကြီးတွေ ဘေးသို့ ပိုကားလာပီး ဒူးနှစ်ချောင်းကလည်း ထောင်လာတယ် တင်ပါးကြီးတွေဟာလည်း အပေါ် ကို မြောက် မြောက် တက်လာတယ် အားးး မောင် မောင် ´´ ကျွန်တော် လက်ခလယ် တစ်ချောင်း တည်းသာထည့်ပီး ကလိ နေရာမှ လက်နှစ် ချောင်းပူးထည့်လိုက်တယ် လက်မ က စောက်စိ ကို ပွတ်ရင်း လက်ညိူးလက်ခလယ် နှစ်ချောင်း ပူးဖြင့် အတွင်းထဲကို မွှေနှောက် ပေးလိုက်တယ် ။ နို့သီးတွေကို စုပ်နေတာလည်း မပြတ် ။ အားးး မောင် … ဇာ အရမ်းကောင်းနေပီ အားးး ရှီးးးး ´´ ဖောက် ဖောက် ပလောက် ပလောက် ´´ ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ´´ ဖောက် ဖောက် ဖောက် …´´ အားးး မောင် … အားးးရှီးး ´´ ဖောက် ဖောက် ပလောက် ကလောက် ´´ ဆယ်မိနစ်လောက် ဆက်တိုက် လက်ညိူးလက်ခလယ် နှစ်ချောင်းပူး လုပ်လိုက်ရာ မဇာ တင်ပါးကြီးတွေ အပေါ် ကို မြောက် တက်လာပီး အဖုတ် အတွင်းမှာ အရည်စိုစို တွေပိုထွက်လာကာ တင်ပါးကြီး တွေ ပြန်ကျသွားတယ်
မဇာ ပီးသွားလားး ´´ ခေါင်းလေး ညိမ့်ရုံသာ ညိမ့်ပြ ရှာတယ် လက်နဲ့ ပဲ လုပ်ရသေးတယ် ပီးသွားတာလား ´´ မောင် လက်က လည်း ကျွမ်းကျင်တာကိုးးး ´´ အင်းးး ဒီတခါ မောင့် အလှည့်နော် ´´ အင်းး ပြောလေ မောင် ဇာ ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ´´ မဇာ စက် ပတ် ကို ကိုင်ထားတဲ့ ကျွန်နော့် လက်မှ လက်ညိုးလေး ကို မဇာ နုတ်ခမ်း ပေါ် တင်ပီး နုတ်ခမ်းလေး ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်တယ် စုပ် လိုက် ´´ ပြွတ် ပြွတ် …´´ ငံတယ် ´´ မောင့်လီး ကို ကော စုပ်ပေးပါလား ဖြစ်တယ် မလား ´´ အင်းးး ဖြစ်တာပေါ့ သိပ်ဖြစ် ´´ ပက်လက် လှန်နေရာ မှ ထထိုင်ကာ ကျွန်နော့် လီး ကို လာကိုင်တယ် ကျွန်နော် လည်း ကုတင်ဘေးမှာ မတ်တပ်ရပ်လိုက်တယ် ။ မောင့် လီးက အကြီးကြီးပဲနော် ´´ ဆယ်တန်းကတည်းက ဂွင်းတိုက်ပီး ကြီး အောင် လုပ်ထားတာ ´´ ဟိဟိ တကယ် ´´ အင်း ပေါ့´´ ကျွန်နော့် လီးတံအပေါ်မှ အရည်ပြား ကို ဆွဲ လှန်လိုက်တယ် ရော့ ဒစ် ကို အရင် ယက်ပေးနော် ´´ ကျွန်နော့် စကားတောင် မဆုံးလိုက် ကျွန်နော့် ဒစ်ဖူး ပေါ်နုတ်ခမ်းလေး ရောက်လာတယ် ။ ပီးတော့ ဒစ်ဖျားလေး မြုပ်ရုံ နုတ်ခမ်းလေး ထဲ ဝင်သွားတယ် ။ အားးးး နွေးနေတာပဲ ကောင်းလိုက်တာဗျာ ကုတင်ပေါ်မှာ ခြေထောက်လေး တွဲလောင်းချထိုင်ကာ ကျွန်နော့် လီးကို စစုပ်တော့တယ် ။
ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´ အ..အားး အ´´ ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´ အားး ဟုတ်တယ် လီးဒစ်ကို လျှာ နဲ့ မွှေပေး အားး´´ ပြွတ် ပြွတ် ပလက် ပလက် ´´ အားး ကောင်းလိုက်တာ မောင် လီး အဆုံးထိ ငုံကြည့်နော် ´´ ကျွန်နော် ပြောပီး လီးကို ပါးစပ်ထဲ အဆုံး ထိ ထိုးထည့်လိုက်တယ် အာခေါင်ကို သွားထောက်တယ် အူးးးးးအုအု …အု´´ လီးကို ပါးစပ်ထဲမှ အတင်းပြန်ထုတ်တယ် မျက်ရည် တွေပါ ဝိုင်းသွားတယ် ဆောရီးနော် စိတ်လောသွားလို့´´ သွားးး မောင်က အတင်းကြီး လုပ်တယ် အသက်ရှူတောင် အောင့်တယ် ´´ဆောရီးနော် မောင် လုပ်ချင်ပီကွာ တအား တောင်နေပီ ´´ အင်းးး ဘယ်လိုနေပေးရမလဲ ပြောလေ ဇာလည်း အဖုတ်ထဲက တ အားယားနေပီ ´´ ကုတင်ပေါ်မှာ ကုန်းလိုက် မောင် အောက်ကနေ မတ်တပ်ရပ်ပီး လိုးမယ်နော် ´´ အင်းးး ´´ မဇာ ကုတင်ပေါ် မှာ လေးဘက်ထောက်ကုန်းကာ ဖင်ကြီး ကို ကျွန်နော့် ဘက်လှည့်ပေးလိုက်တယ် အားးးပါးး အခုမှ သေချာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင် လိုက်ရတဲ့ မဇာ ရဲ့ တင်ပါးကြီး ဖြူဖွေနေတဲ့ မျှစ်စို့ကြီးအလား ။
မိန်းမ တင်ပါးတွေက ကုန်းလိုက်ရင် ခပ်ပိန်ပိန် မိန်းမတွေတောင် တင်ပါးက ကြီးလာသလို မျိုးထင်ရတာ အခု လို မဇာရင်ပြည့်တင်းတင်း တင်ပါးကြီးတွေကို ကုန်းလိုက်တော့ နောက်ကို ကော့လန် ထွက်ကာ လုံးဝန်းနေတယ် ။ ခြေနှစ်ချောင်းကို ခပ်ကျဲကျဲ ဟ ထားပီး ကုန်းထားတာ မို့ ဖင်ကြားထဲမှ စအိုဝ နီညိုရောင်လေး နဲ့ အောက်က အဖုတ် အာအာ လေး က အတိုင်းသား နောက်ကို စူထွက်လာသလိုပဲ ၊ ကျွန်နော်က မတ်တပ် ရပ်ထားတာ မို့ ကျွန်နော့် လီး နဲ့ မဇာ ဖင်တုံးကြီးက တတန်းတည်း အနေအထားမှာ ရောက်နေတယ် ။ ကျွန်နော် လက်တဘက်က မဇာ ရဲ့ အဖုတ်ကိုလှမ်းကိုင် လိုက်တယ် ။ နောက်တဘက်က တင်ပါးကြီး ကို ပွတ်ကြည့်လိုက်တယ် ချောမွှေ့ နေတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေ လုံးခဲအယ် နေတာပဲ မဇာ စုပ်ထားလို့ တံတွေ တွေ ဖြင့် ပြောင်လက်နေတဲ့ လီးတံ ကို မဇာ ရဲ့ အဖုတ်ဝ မှာ အသာ တေ့လိုက်တယ်
မဇာ လက်တဘက်က အဖုတ်မှာ တေ့ထားတဲ့ ကျွန်နော့် လီး ကို လာကိုင်ကာ အဖုတ်နဲ့ အထက်အောက်ပွတ်ဆွဲလိုက်ရင်း အဖုတ် အတွင်းသားထဲကို လီးဒစ်မြုပ်အောင် ထိုးသွင်းလိုက်တယ် ။ ကျွန်နော် လည်း မဇာရဲ့ တင်ပါး တဘက်တချက် ကို ကိုင်ကာ ခါးကို ကော့ပီး လီးကို ထိုးသွင်းလိုက်တယ် အားးး မောင် ဝင်သွားပီ ´´ ဗြွတ် .. ဘွတ် ဘွတ် ´´ ချက်ချင်းပဲ ကျွန်နော် လီး ကို အဝင်အထွက် မြန်မြန်ဖြင့် နောက်ကနေ စောင့်လိုးပစ်လိုက်တယ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ ဖတ် ဖတ် ဖတ် ´´ ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ အားးးမောင် အားးး ကောင်းးး ကောင်းးး´´ အင်း ရော့ အင်းးးးအားးးး ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ ဖတ် ဖတ် ဖတ် ´´ အားးး မောင် ရေ…ကောင်းတယ် အားးးး ´´ လေးဘက်ကုန်းထားရာမှ သမင်လည်ပြန်ဖြင့် ကျွန်နော့် ကို လှမ်းကြည့်တယ် အားးးး အားးးမောငြ လိုးလိုးလိုးးးး´´ မဇာမျက်နှာမှာ ရာဂ စိတ်တွေ အပြည့် …လက်နှစ်ဘက် ထောက်ထားရာမှ လက်တဘက်ကို ကိုယ့်ဘာသာလည်း ပြန်ပွတ်နေတယ် ။ အားးး မောင် လိုးကွာ.. အားးး ဇာ့ ကို လိုးကွာ´´ အင်းးးးလိုးနေတယ် ဇာ ရယ် ကောင်းရဲ့လားး အားးးဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ အင်းးး ကောင်းတယ်ကွာ လီးတဆုံး စောင့်လိုးပေးစမ်းပါ အားးး ဒီလို မခံစားရတာ ကြာပီကွာ မောင့်လီး အရမ်း ကောင်းတာပဲ အားးး´´ တင်ပါးတွေကို အတင်းဖျစ်ညှစ်ကာ ကျွန်နော် နောက်မှ စောင့်စောင့်ပီး လိုးနေမိတယ်
ကျွန်နော့် ရဲ့ စောင့် ချက်တွေက တဖြည်းဖြည်း အရှိန် ပိုပို မြန်လာသလို ကျွန်နော့် ပေါင်နဲ့ မဇာ တင်ပါးကြီးတွေ ရိုက်သံ ကလည်း အခန်းထဲ မှာ ဆူညံ ထွက်လာတယ် ဖောင်းးးဖောင်းးးဖောင်းးးဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ အားးး မောင်ရေ အားးး´´ တင်ပါး ဝိုင်းဝိုင်း ဖြူုဖူ ကြီးတွေကို ကျွန်နော်လက်က ဖျစ်ညှစ်ထားတာ ကြောင့် တင်ပါးမှာ ရဲစပ်လာတယ် ။ ကျွန်နော့် ရဲ့ စောင့်ချက်တွေက မြန်မြန်လာသလို မဇာက လည်း ရှေ့ မှနေ၍ နောက်ပြန် စည်းချက်ညီညီ ပြန်စောင့်လာတယ် ။ အဖုတ်ထဲမှ အရည်တွေက တဖြည်းဖြည်း ပိုမို စိုစွတ်လာပီး ပေါင်ဂွကြားသလို စီးကျလာတယ် ။ ရေချိုးပီးကာစ မဇာရဲ့ ခါးလည် လောက်မှာ ချွေးစက်တွေ ထွက်လာသလို ကျွန်နော့် နားထင် ကြောမှလည်း ချွေးတွေ ကျဆင်းလာတယ် ။ ဖောင်းးးဖောင်းးးဖောင်းးးဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ အားးး မောင်ရေ အားးး´´ ဖောက် ဖောက် ဖောက် ´´ အားးး အ အားးး´´ အားး ရှီးးးး အားးး ကောင်းတယ် လိုးကွာ မညှာ နဲ့ စောင့်လိုးပေးးးးး မဇာ ထပ်ပီးချင်လာပြန် ပီ ´´ အားးးးးး´´ “`ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ အင်းးး မောင်လည်း ပီးတော့ မယ် အဖုတ်ထဲ ကို ထည့်လိုက်တော့မယ်နော် အားးး´´ အင်းးး ထည့်လိုက် အားးး ထည့်ထည့် မောင့် လရေတွေ ထည့်လိုက်ပါ အားးး´´ အင်းးးးအင်းးးးအားးးး ထွက် ထွက် ကုန်ပီ အားးး´´ အင်း အားးးးထည့် အားးးရှီးးးး ကောင်းတယ် မောင် အားးး´´ ကျွန်နော့်လီးထိပ်မှ သုတ်ရည်တွေ မဇာ စောက်ဖုတ် အတွင်းသားထဲကို ခပ်ပြင်းပြင်း ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တော့တယ် ။ အားးးး ကောင်းလိုက် မ ရယ် ´´ ကျွန်နော့်လီး ကို ဆွဲ မထုတ်သေး ပဲ စောက်ဖုတ် ထဲမှာ သွင်းထားဆဲ မဇာ ကတော့ လေးဘက်ထောက်ထားရာမှ အောက်ကို မှောက်ကျ တော့မလိုလို ဖြစ်နေတာ ကြောင့် တင်ပါးကြီး တွေကို ဆွဲ ထိန်းထားလိုက်ရတယ် ။ ခန နေတော့မှ ကျွန်နော့် လီးတံ ကြီး ကို အပြင်ဘက်ကို ဆွဲ ထုတ်လိုက် တယ်
ပလွတ် …´´ ဖင်ကုန်းထားတာကြောင့် ကျွန်တော့လရေတွေက စောက်ပတ် ထဲမှ ဖြေးဖြေးချင်းအောက်ကို စီးကျလာတယ် မဇာ တင်ပါးကြီးတွေကို ဖြေးဖြေး ချင်း ထိန်းပီး အောက်ကို ချပေးလိုက်တော့ မဇာ တစ်ယောက် ကုတင်ပေါ် မှောက်လျှက်သား ဖြစ် သွားတယ် ကျွန်နော့် လီး ကတော့ နဲနဲ မပျော့တပျော့ ဖြင့် စောက်ဖုတ်ရည် လရည် တွေ ပေပွလန် နေတယ် ။ ကျွန်နော် လည်း ဘေး က ထိုင်ခုံမှာ ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်ချလိုက်တော့တယ် ။ ခန တဖြုတ် နားနေပီးတော့ ကျွန်နော် လည်း ရေချိုးခန်းဝင် ရေချိုး မဇာက လည်း သူစောက်ပတ် ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ် ပီးတော့ နှစ်ယောက်သား ဘီယာ နဲ့ ဝိုင် ခွက်တိုက်ပီး သောက်လိုက်ကြတယ် ။ ကျွန်နော် တို့ နှစ်ယောက်သား အဲ့ဒီ ည တစ်ညလုံးမီးကုန်ယမ်းကုန် ကဲပစ် လိုးပစ် လိုက်ကြတယ် ။ ကျွန်နော် ငါးချီလောက် ပီးအောင်လုပ် လိုက်တယ် နောက်ဆုံး ကျွန်နော် တို့ နှစ်ယောက် ည ၂ နာရီလောက်မှာ အိပ်ပျော်သွားတော့တယ် ။ ကျွန်နော် မျက်လုံးပွင့်လာတဲ့ အချိန် ဘေး ကိုကြည့်လိုက်တော့ မဇာ မရှိတော့ ဘေးက ခေါင်းအုံးလေးပေါ်မှာ စာလေး တစ်စောင် တွေ့ လို့ အိပ်နေရင်းပဲ လှမ်းယူ ပီး ဖတ်လိုက်တယ် မောင် ဇာအလုပ်ကိစ္စ နဲ့ အပြင်ခန သွားတယ် နေ့လည် ၁၁ လောက် ပြန်ရောက်မယ်နော် မောင်အိပ်နေတာ ချစ်စရာလေး မို့ မနှိုးရက်တာ နဲ့ မနှိုးခဲ့တာ ချစ်တယ် ´´ နာရီကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့
ဟင်… ဆယ်နာရီတောင် ထိုးပီးသွားပီ ကျွန်နော် တော်တော် အိပ်ပျော်သွားတာပဲ အိပ်ယာပေါ် မှ ထကာ ရေချိုးခန်းဝင်ပီး ရေကို ဝအောင်ချိုးပစ်လိုက်တယ် ရေချိုးပီးတော့ ဘိုက်ထဲ ဆာသလိုလို ဖြစ်လာတာ နဲ့ ရက်ဆရှင် ကို ဖုန်းခေါ်ပီး စားစရာမှာစားပီး တီဗီ ထိုင်ကြည့်နေတုန်း ဒေါက် ဒေါက် ဒေါက် ´´ အော် …မဇာ ပြန်လာပီအထင်ဖြင့် တံခါး ကို ဆွဲ လှပ်လိုက်ရာ… မဇာ မဟုတ် …ကျွန်နော့် မရီး မစုဖြစ်နေတယ် ဟာ…မစု ဘယ်လို ရောက်လာတာ…လဲ´´ အခန်းထဲ လှမ်းဝင်လာပီး ဒီလိုပဲပေါ့ ´´ မစုက သူရဲ့ ပုံစံ အတိုင်း အပေါ်က ဘလောက်စ် အကျီ လက်ပြတ် နဲ့ အောက်က ထမိန်စကပ် အနက်ရောင်လေး ပဲ ဝတ်ထားတယ် ။ လက်ကိုင် အိတ်ကို စာပွဲ ပေါ် အသာပစ်တင်လိုက်ပီး ကျွန်နော့် ပါးကို တချက်လာနမ်းတယ် ကြည့်စမ်းပါဦး ငါ့မောင် မျက်ကွင်းတွေတောင်ချောင်ကျသွားတယ် ဘယ်လောက်တောင် ကဲ လိုက်ကြလဲ မသိဘူး ´´ အေးဆေးပါ မစုရဲ့ ဒီလောက်တော့ အပျော့ပါ ´´ မစုတင်ပါးလေး ကို ကိုင်ပွတ်လိုက်ပီး နုတ်ခမ်းလေး ကို အသာ နမ်းစုပ်လိုက်တယ် ။ ကျွန်နော် ကုတင်ပေါ် မှာ ထိုင်လိုက်တော့ မစုက ကျွန်တော့် ပေါင်ပေါ်မှာ တက်ထိုင်တယ် ။ ပေါင်ပေါ်ကို ကျရောက်လာတဲ့ မစု တင်ပါးကြီးတွေက အိနေတာပဲ ကျွန်နော် အသာကိုင်ပွတ်လိုက်ပီး မစု ကျွန်နော့်ကိုလွမ်းလို့လိုက်လာတာ လား ´´
ဒါပေ့ါကောင်စုတ်လေး ရဲ့ ညက မောင်လေး မရှိတော့ အိပ်လို့ တောင် သိပ်မပျော်ဘူး သူကတော့ ကောင်းကောင်းဇိမ်ခံနေတယ်ပေါ့ ´´ မစု အလိုကျ မဇာ နဲ့ လာနေပေးရတာပါနော် မစုပဲ ကျွန်နော့် ကို လွှတ်လိုက်ပီးတော့ ´´ မစုက ကျွန်နော့်ပေါင်ပေါ်မှာ ထိုင်နေ တော့ သူ့ ရဲ့ နို့တွေက ကျွန်နော့် မျက်နှာ နဲ့ တတန်းတည်း ဖြစ်နေတယ် ။ မစု ရင်ဘက်နားမှ ရေမွှေးနံ့ ချိုအီသင်းသင်း လေး တချက် ရလိုက်တယ် မစုက ကျွန်နော် ခေါင်း ကို ကိုင်ပီး သူ့ ရင်ဘတ်တွေ နဲ့ ကျွန်နော့် ပါး ကို ပွတ်ဆွဲ လာတယ် ။ ကျွန်နော် လည်း ကျွန်နော့် ပေါင်ပေါ် ထိုင်နေတဲ့ မစုရဲ့ တင်ပါးတွေ ကို ပွတ်နေရာက ပေါင်တံတွေ ကို ဖြေးဖြေးချင်း ပွတ်ပေးရင်း ထမိန်စကပ်အကွဲ ကြောင်းထဲ ကို လက်နှိုက်လိုက်ပီး ပေါင်တွင်းသားလေးတွေကို ဖြေးဖြေး ချင်း ပွတ်ပေးလိုက်တယ် ။။။ ပေါင်တံလေးတွေ တဖြည်းဖြည်း ကား လာပီး ပေါင်ဂွကြား အလည် သို့ အရောက် အတွင်းခံ ပေါ် ကို ကိုင်မိလိုက်ချိန် စိုစွတ်နေတဲ့ အထိ အတွေ့ ။ မဇာ စိတ်တွေ ပြင်းပြနေ ပီထင်တယ် ။ထမိန်စကပ် အကွဲ ကြောင်း ထဲ မှ လှမ်းနှိုက်ရသဖြင့် အဖုတ်နေရာ ကို ထိထိ မိမိ ကိုင်မရ …
မောင်လေး ဖိုးဇော် …မစု မောင်လေး ကို စွဲနေပီကွာ´´ အင်းးးးဟင်းးးအင်းးးး´´ ဒေါက်…ဒေါက်…ဒေါက် ´´ အဲ လခွမ်းမှပဲ ဘယ် သူတံခါးလာခေါက်လဲမသိ မစုလည်း လန့်ဖျန့်ပီး ကျွန်နော့်ပေါင်ပေါ်မှ ဆင်းကာ ကုတင်ပေါ် တွင် ထိုင်လိုက်တယ် တံခါးပေါက် ဖွင့် အပီး တံခါးရှေ့တွင် ရောက်နေသော မဇာ ကို တွေ့လိုက်ရတယ် အော် …မဇာ ဘယ်သူများလဲလို့ မစုတောင် ရောက်နေတယ် ´´ တံခါးဖွင့်ပီး အခန်းထဲကို ဝင်လာသောမဇာက ကောင်မစုတ် ဘာလာလုပ်တာလဲ ညည်းမောင် ကို စိတ်မချလို့လား ´´ ဒါပေါ့ဟ တော်ကြာ ညည်း ငါ့မောင် ကို ဝါးစား လိုက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဟိဟိ ´´ စောက်ပိုတွေ လုပ်မနေနဲ့ မိစု ညည်းအကြောင်း ငါ အသိဆုံးပဲ မှန်းစမ်း ´´ ဆိုပီး မဇာက မစုရဲ့ ထမိန်စကပ် အကွဲကြောင်းထဲ လက်ထိုးထည့်ကာ စမ်းလိုက်တယ် ဟွန်းးးး ကောင်မ ထင်တဲ့ အတိုင်းပဲ တော်တော် ရွနေပီမလား ´´ အောင်မ ညည်းကျတော့ မရွ တာကျနေတာပဲ နော် ဟွန်းးးး´´ မစုကလည်း မဇာ ရဲ့ ထမိန်ပေါ် မှ စောက်ဖုတ်နေရာ ကို လှမ်းကိုင်ရင်း ကုတင်ပေါ် မှာ လုံးထွေး ကျသွားတယ် ထို့နောက် နှစ်ယောက်သား ကုတင်ပေါ်မှာ လုံးထွေးပီး တစ်ယောက်စက်ပတ် တစ်ယောက်နှိုက်နေကြတာ ထမိန်တွေက ဒူး အထက်ကိုလန်ကုန်ကြတယ် ။ခြေသလုံးသားဖွေး ဖွေး ဥဥ နှင့် ကြည့်ကောင်းသဖြင့် ကျွန်နော်လည်း ဘေးက ထိုင်ကြည့်နေလိုက်တယ် ။ ကုတင်ပေါ်မှာ လုံးထွေးနေကြတာ ဗွတ်အိုင် ထဲ ငါးရံ နှစ်ကောင် တွန့်တွန့် လူးနေကြသလိုပဲ ။ အသက် သုံးဆယ်ကျော် အိမ်ထောင်သည် နှစ်ယောက် ကုတင်ပေါ်မှာ တွန့်တွန့် လူး အောင် တစ်ယောက် အဖုတ် တစ်ယောက်နှိုက်နေကြတာ ကြည့်ပီး ကျွန်နော့် လီးက လဲ ထောင်မတ်လာတယ် ။ ကျွန်နော်လည်း ထိုင်နေရာမှ ထကာ အဝတ်တွေ အကုန်ချွတ်ပစ်ရင်း ကုတင်ပေါ် သို့ လှမ်းလာလိုက်တယ် နှစ်ယောက်သားက တစ်ယောက်နုတ်ခမ်း တစ်ယောက် ကစ်ဆင် ဆွဲနေကြပီ ကျွန်နော့် လက်နှစ်ဘက်က သူမတို့ရဲ့ တင်ပါးတွေ ကို ထမိန် ပေါ် မှ လှမ်းကိုင်လိုက်တော့မှ နှစ် ယောက်သား ကျွန်နော့် ကို ခေါင်းထောင်ကြည့်ကြတယ် ပီးတော့ အဝတ်ဗလာ နဲ့ ကျွန်နော့် ကို သဘောကျစွာ ရီရင်း ထထိုင်ကြ တယ် ကဲ ကောင်မ တူးဝမ်း ဆွဲကြစို့´´
ကဲ မောင်လေး ပက်လက်လှန် အိပ်ထားလိုက် ´´ ကျွန်တော် ပက်လက်လှန် ကာ အိပ်ချလိုက်တယ် သူမတို့ နှစ်ယောက် ကုတင်ပေါ် မှာပဲ မတ်တပ် ရပ်ရင်း တစ်ယောက် အကျီတွေ တစ်ယောက် ချွတ်လိုက်ပြီး အဝတ်ဗလာ ကိုယ်စီ ဖြင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတ်တပ် ရပ်ရင်း ကစ်ဆင် ဆွဲနေကြသေးတယ် သူတို့ နှစ်ယောက်မှာ ပေါင်တံတွေက အတူတူ လောက်ရှိပေမယ့် တင်ပါးကျတော့ မစုက ပိုကားတယ် ။ မစုရော မဇာ ရော ဘော်ဒီတွေ က လှတုန်းပတုန်း။ ကျွန်နော်လည်း ပက်လက်လှန် ကာ ဂွင်းထုရင်း မစု နဲ့ မဇာ ရဲ့ အလှအပတွေ ကိုငေးကြည့်ရင်းကျွန်နော့် ရဲ့ ကံကောင်းမှုတွေကို တွေးကာ ပီတိ ဖြစ်နေမိတယ် ။ မစုနဲ့မဇာ တစ်ယောက် တင်ပါး တစ်ယောက်ပွတ်ရင်း ကစ်ဆင်ဆွဲနေကြတာ နို့သီးတွေက လည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပူးကပ်နေတော့တယ် ။ မမတို့ ဒီမှာ တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေပီနော် ´´
ဟိဟိ … လာပီ ´´ ဆိုပီး ကျွန်နော့် ပေါင် ဘေးတဘက်တချက်စီမှာ ဝင်ထိုင်တယ် ပထမဆုံး ကျွန်နော့် လီး ကို လာကိုင်တာက မစု မ ဇာကတော့ ကျွန်နော့် ရင်ဘတ်တွေကို သူ့လက်ဖဝါးလေး နဲ့ ပွတ်သပ်နေတယ် ထို့နောက် မဇာက ကျွန်နော့် လီးကို နုတ်ခမ်း ဖူးဖူး ဖြင့် ဒစ်ကို ပွတ်သပ်ပေးတော့တယ် အဲ့ဒီ အချိန်မှာပဲ မဇာက ကျွန်နော့် ကိုယ်ပေါ် တက်ခွပီး ကျွန်နော့် နုတ်ခမ်းတွေကို ဆွဲစုပ်တော့ တာပဲ ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´ မဇာ နို့သီးတွေက ကျွန်နော့် ရင်ဘက်မှာ ကပ်နေတယ် ကျွန်တော့လက်တွေကလဲ ကျွန်နော့် ပေါ် တင်ခွ ထားတဲ့ မဇာ ရဲ့ တင်ပါးတွေ ကို ပွတ် သပ်ရင်း ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားထဲကို လှမ်းလိုက်တယ် အပေါ်ကနေ လှမ်း ကိုင်တာမို့ စောက်ဖုတ် ကို ထိထိ မိမိ မကိုင်နိုင် လက်လှမ်းမမှီ ဖြစ်နေတယ် ။ အဲ့ဒီ အချိန်မှာ မစုက ကျွန်နော့်လီး ကို စုပ်နေရာမှ ရပ်လိုက်ပီး ကျွန်နော့် လက်ချောင်း ကို လှမ်းယူက သူမ ပါးစပ် ထဲ ထည့်ကာ စုပ်လိုက်ပီး တံတွေးတွေ စွတ်ပေးတယ် ပီးတော့ ကျွန်နော့်လက်ကို မဇာ ရဲ့ စအို ၀ ပေါ် တင်ပေးလိုက်တယ် ။ ကျွန်နော်လဲ မဇာ ရဲ့ ဖင်ဝ လေး ကို ပွတ်လိုက်တော့ မဇာက ကျွန်နော့် နုတ်ခမ်းတွေ ကိုစုပ်ရင်း ခေါင်းငြိမ့်ပြတယ် … ဆက်လုပ် နှိုက်လို့ ရတယ် ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ ကျွန်နော့်လက်ခလယ် တစ်ဆစ် လောက် ဖင်ဝ ထဲ ထိုးသွင်း လိုက်တယ် .
အင့်…အုးးး´´ ကျွန်နော့် လက်က မဇာ ရဲ့ ဖင်ဝ ထဲ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် နဲ့ ကစားပေးနေတယ် မဇာ အနမ်းတွေကလည်း ကြမ်းလာ သလို အသက်ရှူသံတွေကလည်း တအား ပြင်းလာတယ် အောက်က စုပ်ပေးနေတဲ့ မစုရဲ့ စုပ်ချက်တွေကလည်း တဖြည်းဖြည်း မြန် မြန်လာတယ် တချက်တချက် မစုက ကျွန်နော့် လီးကို ပါးစပ်ထဲမှ ချွတ်ပီး မဇာ ရဲ့ အဖုတ် အကွဲ ကြောင်း နဲ့ ပွတ်ပွတ်ပေးလိုက် ပြန် စုပ်လိုက်လုပ်နေတယ် ။ မိစု ငါ့ စက်ပတ်ထဲ လီးထိုးထည့်ပေးစမ်းပါ ငါ့ဖင်ဝ ကို နင်ယက်ပေး ´´ “အင်းးး အင်းးး´´ မစုက ပါးစပ် ထဲမှ လီးကြီး ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ကာ မဇာ အဖုတ်ထဲ ကို ထိုးသွင်းပေးလိုက်တယ် ။။။ဟားးးးမဇာ အဖုတ်က တော်တော် ရွဲနေတာပဲ ချောချောချူချူ ဝင်သွားတယ် မဇာက အပေါ်က နေ စောင့်စောင့်ပီး သွင်းပေးသလို ကျွန်နော် ကလည်း အောက်ကနေ ပင့်ပင့် ပီး ထိုးပေးလိုက်တယ်
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ရာဇဝငျတှနေဲ့ ငါ